Pannzagar: September 2008
မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ သဘောတ...
စစ်အစိုးရကို တရားဝင်မှု ရုတ်သိမ်းရေး တောင်းဆိုချက် ...
NLD ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည့် (၂၀)နှစ်မြောက် ကြေငြာစ...
ပါတီသက်နှစ်(၂၀) ထိ အလံမလှဲ တဲ့ ပါတီ (NLD) အခမ်းအနာ...
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အမှတ်တရ ဆစ်ဒနီနဲ့ ပါ့သ် မှာ ...
NLD အနှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ပါတီဝင် ၃ ဦး ထ...
Saffron Revolution တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ
ကဖျက်ကယနိုင်ငံတွေက UN ကို ချည့်နဲ့အောင်လုပ်နေ
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် လွတ်မြောက်ပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တောင်းဆိုချက်များကို စစ်အစိုးရ...
ကုလဆုံးဖြတ်ချက် စစ်အစိုးရလိုက်နာရန် ဂမ်ဘာရီတိုက်တွ...
စစ်အစိုးရ ကိုယ်စားပြုမှု ကန့်ကွက်လွှာ အထွေထွေ ညီလာခ...
Credentials Challenge by NCUB
Court Says PM Must Resign
NLD Knocked Out Soon???
2 students shot when marching to PM home
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ...
မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ သဘောတူညီချက်မရ
Washington Times _ 28 Sept 2008
ဒီမိုကရေစီအရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့မှု တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ အဓိကကျတဲ့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေအကြားမှာ နအဖကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ဆောင်လာဖို့ ဘယ်လိုတွန်းအားပေးမလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ သဘောတူညီချက် မရကြသေးပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် မနေ့က စနေနေ့မှာ မြန်မာ့အရေးကို စုဝေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေး ဂမ်ဘာရီတို့ဟာ ဒီဇင်ဘာမှာ ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျော့ယီယိုက “သူ(ဘန်ကီမွန်း) က မြန်မာပြည်ကို နောက်ထပ်သွားဦးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ နောက်ထပ်သွားမယ်ဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ အများကြီး သတိထားရပါမယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခရီးစဉ်အပေါ် မျှော်လင့်ချက်တွေကို စိစစ်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။ “မြန်မာပြည်မှာ မြင်သာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မှုမရှိပဲနဲ့ သူနောက်ထပ် မသွားသင့်ပါဘူး” လို့လဲ ဖြည့်စွက်ပြောကြားသွားပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ သံအမတ်ကြီးများ ၁၅ ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဒီမြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘယ်လိုမျိုး စံသတ်မှတ်ချက်ကမှ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကို အာမခံချက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ သဘောတူညီချက် မရခဲ့ကြပါဘူး။
ဒီဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနဲ့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီတို့ဟာ သတင်းထောက်များနဲ့ ပြောကြားဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတဲ့ နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်ပေးဖို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စတင်ဖို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို ဖော်ပြထားတဲ့ အကျဉ်းရုံး ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့နည်းတူ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဗီယက်နမ်၊ စင်္ကာပူနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ကို လွှတ်ပေးခဲ့မှုအပေါ် ချီးကျူးလိုကြပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဗြိတိန်၊ နော်ဝေ၊ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ သြစတြေးလျှတို့ကတော့ ဒီအပြုအမူဟာ မလုံလောက်သေးဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။
အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ဒုတိယခရီးစဉ် သို့မဟုတ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ငါးကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ်တွေဖြစ်လာဖို့ အခြေအနေလိုအပ်ချက်ဟာ အီးယူနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက အလေးအနက်တောင်းဆိုနေသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်မလားလို့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးမြန်းချက်ကိုတော့ မစ္စတာယီယိုက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲ အနေအထားမှာ ဒီမဖြစ်စလောက် အရေအတွက်ကလေးလွှတ်ပေးခဲ့တာကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ ငြင်းဆိုကြပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပြည်သူတွေ အတိဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ အတင်းအဓမ္မ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်ကိုလည်း နိုင်ငံအနည်းအကျဉ်းကသာ လက်ခံကြပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့အမြင်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးဖြစ်ထွန်းမှု လုံးဝမရှိပါဘူး” လို့ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာပေါ်လစီအကြီးအကဲ Javier Solana က The Washington Times ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ စင်္ကာပူဟာ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာ့အရေးမှာ အမြဲတမ်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပြီး လက်တစ်လုံးခြား ခေါင်းရှောင်နေဆဲပါပဲ။
စစ်အစိုးရကို တရားဝင်မှု ရုတ်သိမ်းရေး တောင်းဆိုချက် ကုလသမဂ္ဂ လက်မခံ
VOA News_27 September 2008
ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတာကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက တောင်းဆိုထားတာကို ကုလသမဂ္ဂဘက်က ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဦးသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက စစ်အစိုးရ ကို ကုလသမဂ္ဂက အသိအမှတ်မပြုဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသဂ္ဂရဲ့ ဥပဒေရေးရာ ဒုတိယ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပက်ထရီရှာ အိုဘရိုင်ယန်က (Patricia O’Brien) က တုန့်ပြန်ထားချက်ကို မနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ်ရှဲလ် မွန်းတပ်စ် (Michele Montas) က အခုလို ပြောပါတယ်။
“အခုလို မြန်မာနိုင်ငံက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ တင်ပြလာတဲ့ စာပါအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု တစုံတရာ ရှိမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ဒုတိယ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပက်ထရီရှာ အိုဘရိုင်ယန်က ပြောပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အထွေထွေညီလာခံမှာ တင်ပြတဲ့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ နည်းနာတွေအရ သုံးသပ်ပိုင်ခွင့်၊ ကုလသဂ္ဂက ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း အမှတ် (၂၇) နဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိပါဘူး။ စည်းမျဉ်းအမှတ် (၂၇) နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ တရားဝင်တင်ပြချက်တွေ မတွေ့ရပါဘူး၊ ဒီစည်းမျဉ်းအရ ကုလသမဂ္ဂအတွင်း တရားဝင်မှုကို သတ်မှတ်ဖို့ တင်ပြတဲ့အခါ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကသာ တင်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”
ကုလသမဂ္ဂ ဘက်က အခုလို မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ တရားဝင်မှုကို ရုပ်သိမ်းရေးကို လက်မခံသေးပေမယ့်လည်း ပြည်ပရောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ ဒီလို တင်ပြတာကို အလျော့မပေးသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အခုလို ကုလသမဂ္ဂကို စာတင်ပြီး တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့က ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန်းစန်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့ အနေနဲ့ကတော့ အရင်တုန်းကတည်းက ဒီဟာကို ဒီနှစ်မှာ တင်မယ်။ ဒီနှစ်ကို မတင်ဖြစ်ရင် နောက်နှစ်ကို တင်မယ်။ အဲဒီတော့ အခု ငြင်းလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ဟာက ဘာအကြောင်းတွေ ကျမတို့မှာ ဘာ ချို့ယွင်းချက် ရှိလို့ ဆိုတာတွေကို သိအောင်လုပ်ပြီးတော့ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ နောက်နှစ်ခါ ဆက်တင်နိုင်အောင်၊ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ ဒီအကြောင်းကို ပိုပြီးတော့ လုပ်ရဖို့ ဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ ကျမတို့ ဒီမှာ အဖွဲ့ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအလုပ်က အဲန်စီယူဘီ အထွေထွေ တပ်ပေါင်းစုရဲ့ ဦးဆောင်မှု နဲ့ ကျမတို့က လုပ်နေတာပါ။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့ တိုင်ပင်ရပါအုံးမယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာကြောင့် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သိရလို့ရှိရင် ဒီအကြောင်းကို ကျော်လွှားနိုင်အောင် ကျမတို့ ကြိုးစားမှာပါ။ နောက်နှစ်ခါလည်း ကျမတို့ တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားအုံးမယ်လို့ ကျမတို့ ယူဆပါတယ်။”
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့က ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန်းစန်းက ပြောပြသွားတာပါ။
ဒါက VOA ရဲ့ ဖော်ပြချက်ပါ။ International Herald Tribune မှာဖော်ပြထားတဲ့ AP သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ Members of Parliament Union (Burma) ရဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဒေါ်စန်းစန်းက UN နဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ အမြဲတမ်းမစ်ရှင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဦးသိန်းဦးကို ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ထားတယ်လို့ ပြောကြားကြောင်း ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။
NLD ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည့် (၂၀)နှစ်မြောက် ကြေငြာစာတမ်း
ဓါတ်ပုံများနှင့် ကြေငြာချက်ကို အစ်မ မေအိခင်ထံမှ ရရှိပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနှစ် ၂၀ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့ (၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈၊ မနေ့က) ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၇-၉-၂၀၀၈ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေငြာချက်အမှတ် (၂၀/၉/၀၈) ထဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖော်ပြထားပြီး အာဏာပိုင်တို့ရဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ မတရားဖိနှိပ်ထားတဲ့ကြားကပဲ တိုင်းပြည်အတွက် အနှစ် ၂၀ တိုင်တိုင် မယိုင်မလဲ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့ အကျိုးစီးပွားများကို စွန့်လွှတ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ကြံ့ကြံ့ခံလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်များအတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ယူပါကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
နအဖ အနေနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ-၃ နဲ့အညီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးခြင်းမရှိပဲ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေများ၊ ကြေငြာချက်များ၊ ကတိက၀တ်များကို ချိုးဖောက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ပြည်သူလူထုက အာဏာပိုင်တို့အပေါ် အယုံအကြည်ကင်းမဲ့သွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေပြုသူ ကိုယ်တိုင်က ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဖျောက်ဖျက်မရတဲ့ အမဲစက်ကြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်တို့က မိမိတို့ ဥပဒေ၊ ကတိက၀တ်တွေကို ချိုးဖောက်တဲ့အတွက် လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လည်း ပြည်သူတွေက ယုံမှားသံသယရှိမှာဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ဝေဖန်ထားပါတယ်။
မေလလူထုဆန္ဒခံယူပွဲရဲ့ မသမာမှုတွေကိုလည်း ထုတ်ဖော်ကြေငြာထားပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်း ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျတဲ့အတွက် လက်မခံနိုင်ကြောင်း အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ထားပါတယ်။ အနာဂတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက လျစ်လျှူရှုလို့မရကြောင်း၊ တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားအတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ခွင့် ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ကြေငြာထားပါတယ်။
- နအဖ အနေနဲ့ မိမိတို့ ပေးထားတဲ့ကတိက၀တ်တွေအတိုင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမြန်ဆုံးခေါ်ယူပေးရန်။
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးရန်။
- NLD အနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့် ရရန်။
- ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ဖျက်သိမ်းခြင်းခံထားရတဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီများကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေး၍ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီကြေငြာချက်ဟာ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသမျှ NLD ရဲ့ ကြေငြာချက်တွေမှာ အားအရဆုံးကြေငြာချက်တစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဦးဝင်းတင်တို့လို အတွေ့အကြုံရှိ၊ ခံယူချက်ပြင်းထန်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတဲ ခေါင်းဆောင်တွေ NLD မှာ ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာနိုင်လို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် ကြေငြာချက်မှာ ၁၁-၉-၂၀၀၈ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ဦးဝင်းတင်တို့ မလွတ်သေးပါဘူး။) စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ နအဖရဲ့ ရပ်တည်မှုနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်စိန်ခေါ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို NLD ရဲ့ ဦးဆောင်မှု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ကြေငြာချက်အပြည့်အစုံကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာ ယူပါ။
NLD ၂၀နှစ်မြောက် ကြေငြာစာတမ်း
ပါတီသက်နှစ်(၂၀) ထိ အလံမလှဲ တဲ့ ပါတီ (NLD) အခမ်းအနားကျင်းပ
(ဒီသတင်းကတော့ အစ်မ မေအိခင်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကနေ တစ်ပုဒ်လုံးကူးချထားတာပါ။ ကူးချရကောင်းလားလို့ အပြစ်ပြောလဲ ခံရမှာပါပဲ။ ကျွန်တော်က သူရေးထားတဲ့အတိုင်း အရသာမပျက် ပြန်ဖောက်သည်ချချင်တာကိုး...။ ဒါကတော့ ဆင်ခြေပေါ့...။ :P)
ပါတီနှစ်နှစ်ဆယ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ယနေ့ကျင်းပခဲ့သည် ထိုအခမ်းအနားမှသတင်းကောင်းမှာ နိုင်ငံရေးတစ်ခုလုံး ပြောင်းလဲလာနိုင်သည့်သတင်းမှာ ဘဘ ဦးဝင်းတင် နှင့် ဦးခင်မောင်ဆွေကို မူလတာဝန်တရားဝင်ပြန်လည်အပ်နှင်းပြီး ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းအား ရန်ကုန်တိုင်း ဒုဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ပြန်ပေးအပ်ရာ ကာယကံရှင်များမှ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံကြိုဆိုကြောင်း သိရသည်။ နဂိုအင်အားကို ပို၍ မြင့်မားစွာဆောင်ရွက် နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အခမ်းအနားကို အင်အား ၆၀၀ နီးပါတက်ရောက်ပြီး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များမှ တရားဝင် တာဝန်မေးမြန်းခြင်း အပ်နှင်းခြင်းကို စနစ်တကျပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ဤသည်ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့် ပါတီစီအီးစီသည် အရည်အသွေးအမှန်တကယ် စစ်မှန်ပြည့်ဝသောသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းရန် တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရန် ၀န်မလေးကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အလားအလာကောင်းများဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အမှတ်တရ ဆစ်ဒနီနဲ့ ပါ့သ် မှာ လမ်းလျှောက်ချီတက်
မနှစ်က သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာကို နအဖက အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့တာကြောင့် အနည်းဆုံး ၃၁ ဦး သေဆုံးပြီး ၃၀၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို အမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့ သြစတြေးလျှနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီနဲ့ ပါ့သ် မြို့တွေမှာ လူတွေရာနဲ့ချီပြီး လမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြတယ်လို့ The Sydney Morning Herald သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
“အဲဒီတုံးက ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူ ၇၀၀ ကျော်ဟာ ခုထိထိန်းသိမ်းခံနေရတုံးပါပဲ။ ဒီအထဲမှာ ရဟန်းတော် ၁၇၆ ပါးနဲ့ သီလရှင် ၁၀ ပါး ပါဝင်ပါတယ်” လို့ Burma Campaign Australia ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးမြင့်ချိုက ပြောပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေထဲက ရဟန်းတော် ၉ပါး အပါအ၀င် အနည်းဆုံး ၁၈ ဦးဟာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကြောင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်လို့လဲ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ဒီကြီးမားတဲ့ လူထုလမ်းလျှောက်ပွဲတွေ ပြုလုပ်ရတာဟာ သြစတြေးလျှ အစိုးရအနေနဲ့ အထိန်းသိမ်းခံနေရသူတွေ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ကူညီပြီး နအဖကို ဖိအားပေးဖို့ တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆစ်ဒနီမြို့က လမ်းလျှောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပါလီမန်အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သူ John Kaye က “တစ်နှစ်လည်ခဲ့ပါပြီ ကမ္ဘာကြီးဟာ မြန်မာပြည်သူတွေ အတိဒုက္ခရောက်နေတာကို ကျောခိုင်းမနေသင့်ပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။ “ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်လက်ဖိအားပေးသွားဖို့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပြန်ရယူတဲ့ ပွဲပါပဲ။”
“မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီ စိတ်ဓါတ်အားမာန်ဟာ ပြိုကွဲမသွားသေးပါဘူး။ နိုင်ငံတကာမိသားစုရဲ့ ကူညီဖေးမမှုနဲ့ မြန်မာပြည်ဟာ တဖန်ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာဦးမှာပါ” လို့လည်း သူကဆက်လက်ပြောကြားသွားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၇ ဦးကိုလွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးမြင့်ချိုကတော့ ဒါဟာ “အပေါ်ယံဟန်ပြ” လုပ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်ကို လွတ်ပေးပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ပြန်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါ နအဖ အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာဖိအားတွေ လျှော့သွားအောင် အပေါ်ယံဟန်ပြ သက်သက်လုပ်တာပဲ။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၁၃ ယောက်ဟာ ခုထက်ထိ အဖမ်းခံနေရတုံးပဲ။ သူတို့တွေ လွတ်မြောက်ဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းပေးဖို့ သြစတြေးလျှ အစိုးရကို ကျွန်တော်တို့ အရေးဆိုနေတာပါ” လို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်။
NLD အနှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ပါတီဝင် ၃ ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
ဒီကနေ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့ NLD ပါတီ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ NLD ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ပါတီကို စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးတင်ဦးတို့ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရပါတယ်။ ပါတီရဲ့ အနှစ် ၂၀ မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ဒီကနေ့ NLD ရုံးချုပ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။
NLD နှစ် ၂၀ ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ စိတ်ကောင်းစေတနာထားတယ်ဆိုတဲ့ နအဖဟာ NLD ပါတီဝင် သုံးဦးကို ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ Bangkok Post သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဧရာဝတီသတင်းဌာနကတော့ ၉ ဦးလို့ ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်များဖြစ်ကြသည့် မထက်ထက်ဦးဝေ၊ ဒေါ်ရှမ်းမတို့ အပါအ၀င် တခြားပါတီဝင် ၄ ဦးကို အခမ်းအနားမစမီနှင့် နောက်ထပ်ပါတီဝင် ၃ ဦးကို အခမ်းအနားမှအပြန် ပါတီဌာနချုပ်ရှေ့၌ပင် ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။ (ဧရာဝတီ)
ဒီကနေ့ အနှစ် ၂၀ မြောက်အခမ်းအနား မကျင်းပမီမှာ ပါတီဝင်တွေဟာ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးဖို့ ကြွေးကြော်တောင်းဆိုကြပြီး ငှက်တွေကို လှောင်ချိုင့်ထဲက လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ အေးချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ကြွချီခဲ့ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ရဲ၊ စစ်တပ်နဲ့ နအဖရဲ့လက်ကိုင်တုတ် ကြံ့ဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်တွေက ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာစွာ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့လို့ သံဃာတွေတွေ သွေးမြေကျခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းတိုက်တွေကို အတင်းအဓမ္မ၀င်ရောက်စီးနင်းပြီး သံဃာတော်တွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့လို့ ရဟန်းတော်တွေ အတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီလို လူစိတ်မရှိလောက်အောင် ကမ်းကုန်အောင်မိုက်ရိုင်းစော်ကားခဲ့တဲ့ နအဖ နဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်စစ်တပ်၊ လက်ကိုင်တုတ်တွေရဲ့ ဇာတ်သိမ်းကတော့ ဘယ်လိုမှကောင်းနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ သံသရာတစ်လျောက်ပဲ ကြည့်ကြည့် ဒီတစ်ဘ၀ပဲ ကြည့်ကြည့် ဘယ်လိုမှ အဖတ်ဆယ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒီ မိုက်ရိုင်းစော်ကားမှုကြီးမှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တပ်မှုးတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေလဲ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေရှိနေပါတယ်။ နောက်ဘ၀ ငရဲမရောက်ခင် ဒီဘ၀မှာပဲ ကြိုးစင်တက်ဖို့ ပြင်ထားကြပါ။
(အမှန်တော့ဗျာ ... ကျွန်တော်က သတင်းသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တာပါ။ သတင်းသမားဆိုတာ သတင်းကို အာဃာတမထားပဲ အရှိကို အရှိအတိုင်း အပိုအလိုမရှိ တင်ပြရမယ် မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ထဲက ထိုခိုက်ခံစားရတာတွေ ရောပြွမ်းကုန်တာတော့ ခွင့်လွတ်ပါဗျာ။)
Feelings | comments (0)
ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အကျပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဟာ အမျိုးသားရေး အချုပ်အခြာဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုတွေကို ရှောင်ရှားနေတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အပိတ်ဆို့ အဖျက်ဆီးခံနေရတယ်လို့ လစ်သူယေးနီးယား သမ္မတ Valdas Adamkus က အတွေထွေညီလာခံရဲ့ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂဟာ မြန်မာ၊ ဆူဒန်နဲ့ ဇင်ဘာဘွေတို့လို ပြဿနာမီးပွား အစပျိုးနေတဲ့ နေရာတွေမှာ လတ်တလောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် မတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ သူကဝေဖန်သွားပါတယ်။
“ကမ္ဘာကြီးက UN ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ အခြေအနေတွေနဲ့ သင့်လျှော်ကိုက်ညီအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေရဲ့ ပဓာနမကျတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပညတ်ချက်တွေနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာဆိုတဲ့ ဒိုင်းအောက်မှာ အကာအကွယ်ယူပြီး ကုလသမဂ္ဂကို ချိနဲ့အောင် လုပ်နေကြလို့ပါပဲ” လို့ သူကပြောပါတယ်။ သူက လတ်တလောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဂျော်ဂျီယာ-ရုရှား ပဋိပက္ခကို ကိုးကားပြီးပြောကြားရာမှာ ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုအပေါ် နိုင်လိုမင်းထက် ရန်လိုမှုကို တုံ့ပြန်ဆန့်ကျင်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အကြီးအကျယ် ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီကိစ္စမှာ ကျွန်တော်တို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ရတာဟာ ပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုက ကုလပဋိဥာဏ်စာတမ်းနဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်နေလို့လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။” လို့လဲသူက ပြောသွားပါတယ်။
လစ်သူယေးနီးယား သမ္မတက တက်ရောက်လာကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဓိကမစ်ရှင်ဟာ “လူ့သားဘ၀နဲ့ လူသားအခွင့်အရေး” ကိုကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြန်သတိရကြဖို့ကိုလည်း နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
“ကမ္ဘာတစ်လွှား စံထားကြတဲ့ တန်ဖိုးတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ အချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂဟာ မလှုပ်မယှက်နဲ့ တုံဏှိဘာဝေ ပွဲကြည့်နေသူသက်သက်တော့ ဖြစ်လို့မရပါဘူး။ ခုအထိတော့ ကုလသမဂ္ဂဟာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း ကိစ္စတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို ပွဲကြည့်သူသက်သက် ဖြစ်နေတုံးပါပဲ” လို့လဲ ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
၂၁ ရာစုရဲ့ အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း UN ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ရှင်းလင်းနေပါတယ်လို့လဲ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒါဟာ ကမ္ဘာ့အဖိနှိပ်ခံ လူဦးရေအများဆုံးနေထိုင်ရာ တတိယနဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက UN ကို reform လုပ်ဖို့ လိုလားနေပြီဆိုတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲမှာလည်း ဒီနှစ်အတွက် ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူတဲ့ နီကာရာဂွာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Miguel D’Escoto Brockmann ကလည်း “ပိုပြီး ဖိအားပြင်းထန်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့ပြဿနာတွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နဲ့ (အဖွဲ့နိုင်ငံ) အများစုရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို အနည်းစုက မလွှမ်းမိုးနိုင်ရေးအတွက်” ကုလသမဂ္ဂကို ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဖို့ ဆော်သြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဓါတ်ပုံကို NEJ သတင်းဌာနမှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
ဒီကနေ့ မနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်မှာ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ဗန္ဓုလပန်းခြံအတွင်း ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ သတင်းဌာနတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆူးလေကားမှတ်တိုင် အနောက်ကပ်လျက် ပန်းခြံစည်းရိုးအတွင်း ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းများက ဆိုပါတယ်။ ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူအနည်းဆုံး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ကတော့ တစ်ဦးသေဆုံးတယ်လို့ ဖော်ပြသွားပါတယ်။ ရန်ကုန်အေပီသတင်းက လူ (၃) ဦး ဒဏ်ရာရသည်ဟု ရေးသော်လည်း ဒီပီအေ သတင်းဌာနကတော့ လူ (၇) ဦး ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရဲနှင့် လုံခြုံရေးများ ရောက်ရှိလာပြီး ထိုဧရိယာတစ်ဝိုက်ကို ပိတ်ဆို့ ကာရံလိုက်တယ်လို့ သတင်းများက ဆိုပါတယ်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်းကို ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းနဲ့ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရဲစခန်းတို့မှ အတည်ပြုခဲ့သော်လည်း အသေးစိတ်ပြောကြားဖို့ကိုတော့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်လူနာဌာနကို ဒဏ်ရာရသူ (၃-၄) ဦးခန့် ရောက်ရှိလာသည်ဟု ပြောကြောင်း ခေတ်ပြိုင်သတင်းဌာနမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာနကတော့ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ဗုံးတစ်လုံးကိုပါ တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အဆိုပါဗုံးကို ရဲများက ဗုံးမှန်းမသိပဲ မြို့တော်ခန်းမအတွင်းသို့ ယူဆောင်သွားစဉ် ဗုံးရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ အချိန်မှီရောက်လာ၍ စံနက်တံကို ဖြုတ်လိုက်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ လုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်နေတဲ့ကြားက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁ ရက်နေ့ညကလည်း တာမွေမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းကြားရပါတယ်။ ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေအတွက် နအဖအနေနဲ့ ဘယ်သူ့ကို လက်ညှိုးထိုးဦးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွှေပြည်သာ ကြံဖွံ့ရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာတော့ စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအဖွဲ့က သူတို့ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
အစ်မ မေအိခင်က ကျွန်တော့်ကို ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန် ကသာထောင်ကအပြန်လမ်းမှာပဲ ပျောက်သွားတယ်လို့ သတင်းပြောပြပါတယ်။ ဒီသတင်းကို မဇ္ဈိမသတင်းဌာနမှာ အခုလို ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 24 2008 17:15 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုံးအဖွဲ့မှူးအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ၀င်းထိန်ကို မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ကသာမြို့နယ် အကျဉ်းထောင်မှ ယမန်နေ့က လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ယနေ့ နံနက်တွင် ပြန်ဖမ်းကာ ထောင်အတွင်း ပြန်ထည့်လိုက်ကြောင်း မဇ္ဈိမက သတင်းရရှိသည်။
(အသေးစိတ်ကို ဆက်လက် ထုတ်ပြန်သွားမည်)
ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကြံပေး ကိုယ်ရေးအရာရှိအဖြစ် ထမ်းရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ပထမအကြိမ် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၉၆ ခုနှစ် မေလမှာပဲ ပြန်လည် အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ယခု ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း ၁၉ နှစ်အကျဉ်းကျခံခဲ့ရပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေဟာ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်ကို အင်းစိန်ထောင်၊ မန္တလေးထောင်၊ မြင်းခြံထောင်၊ မိတ္ထီလာထောင်၊ ကသာထောင် စသည်ဖြင့် တစ်နေရာပြီးတစ်နေရာ ပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ရှိနေစဉ် အနေအစား ချို့တဲ့တာကြောင့် နှလုံးရောဂါနဲ့ အရိုးကျီးပေါင်းတက်ရောဂါများကို ခံစားနေရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဒီကနေ့ ကြေငြာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီး လွတ်တော်ခေါ်ယူပေးဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ အထူးကြေငြာချက်အမှတ် 18/09/08 မှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ လွတ်တော်အမြန်ဆုံးခေါ်ယူပေးရန်၊ အဲဒီပြည်သူ့လွတ်တော်ကနေ ၂၀၀၈ နအဖ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန်၊ အဆိုပါ ကော်မတီမှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ၆ လအတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်ရန် စတဲ့အချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။ ကြေငြာချက် အပြည့်အစုံကို အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
ဒီကြေငြာချက်ဟာ လူထုက အားမလိုအားမရဖြစ်နေတဲ့ လက်ရှိ NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်တော့ မြင်ပါတယ်။ အလုပ်ဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်းကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
အစ်မ မေအိခင် ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
စစ်အစိုးရက သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကို အနှစ် ၂၀ နီးပါး ထိန်းသိမ်းထားရာကနေ ဒီကနေ့ အင်းစိန်ထောင်ကနေ ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသက် ၇၉နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ ထောင်သက်တမ်း အရှည်ဆုံး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်ဟာ NLD ပါတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းက နအဖရဲ့ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားခြင်း ခံရသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းကတော့ ဦးဝင်းတင်လွတ်မြောက်လာတာကို ကြိုဆိုလိုက်ပြီး သူနဲ့အတူ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာ မေ၀င်းမြင့်နှင့် တောင်ငူလွှတ်တော်အမတ် ဦးအောင်စိုးမြင့်ဦး တို့ကိုလည်း စစ်အစိုးရက လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဦးဝင်းတင်က အင်းစိန်ထောင်ဗူးဝရှေ့မှာပဲ စောင့်ကြိုနေကြတဲ့ လူထုကြီးကို -
“ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးကို ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲ”
“နအဖ ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုလည်း ကျွန်တော် လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးကို ဆက်လုပ်မယ်။ ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးမျိုးလဲ ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အဆုံးသတ်သွားဖို့ပဲ။” လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒီကနေ့ စစ်အစိုးရက အကျဉ်းသား ၉၀၀၂ ဦးကို ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အများစုကတော့ ရာဇ၀တ်သားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်း ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၂၀၀ ကျော်ရဲ့ သတင်းကတော့ မသိရပါဘူး။
ဒီလိုလွတ်ပေးတာဟာ မနှစ်က သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ အေးချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ဆန္ဒပြမှုတွေကို အကြမ်းဖက် ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၆-၂၇ ရက်နေ့တွေ နီးလာချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဂျပန်သတင်းထောက် တစ်ယောက်အပါအ၀င် အနည်းဆုံး လူ ၃၁ ယောက် သေဆုံးခဲ့ပြီး ရာပေါင်းများစွာ အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ တချို့လဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်တော့ ၈၈ တုန်းက ထောင်တွေကို ဖွင့်လွတ်ပေးပြီး ရာဇ၀တ်သားတွေ လူဆိုးသူခိုးဂျပိုးတွေ ရပ်ကွက်တွေထဲ များလာပြီး ငတ်ပြတ်နေချိန်မှာ ရာဇ၀တ်မှုတွေဖြစ်၊ စက်ရုံတွေကို စစ်တပ်က အရင်လာဖောက်ယူပြီး ဖွင့်ထားခဲ့ချိန်မှာ ၀ရုန်းသုံးကား ၀င်ယူကြ၊ တိုင်းပြည်ပျက်နေပါပြီ။ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ဖျက်စီးနေပါပြီဆိုပြီး စစ်တပ်က လူဝင်သတ်။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းကြီးကိုပဲ ပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ်။
ဒီနှစ်ပတ်လည်နေ့ နီးကပ်လာချိန်မှာ စစ်အစိုးရဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ လုံခြုံရေးကို အထူးတင်းကျပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွတိုင်းမှာ လုံထိန်းကား၊ စစ်ကားတွေ အနည်းဆုံး လေးငါးစီး ရပ်ထားပြီး အသင့်အနေအထားယူထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် စစ်အစိုးရဟာ ရန်ကုန်မြို့တော်ကို စစ်မြေပြင်သဖွယ် ပြင်ဆင်နေရာယူထားတာပါ။ သံဃာနဲ့ ပြည်သူလူထုကို တကယ့် ရန်သူကြီးသဖွယ် ချေမှုန်းဖို့ အသင့်ပြင်ထားကြတာပါ။ ဒါလောက် ယုတ်မာ အောက်တန်းကျပြီး ပြည်သူကို ဒုက္ခအမျိုးပေးနေတဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာ အာဏာရှင်တစ်ခုရဲ့ အမိန့်အာဏာကို ဦးထိပ်ထားနေကြတဲ့ တပ်မှုးတွေ တပ်သားတွေကိုလည်း မေးချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်ထဲမှာ အကြောက်တရားကလွဲလို့ ပြည်သူအတွက် အသက်အသေခံရဲတယ်ဆိုတဲ့ သတ္တိသွေး တစ်စက်မှမရှိကြတော့ဘူးလားဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ သွေးတွေ ဖြူနေပြီလား။ ကြောက်တက်ရင် စစ်သားမလုပ်နဲ့။ တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူ့အတွက်။
ဒီသတင်းကို Ko Wunna ရဲ့ ဘလော့ဂ်နဲ့ CNN News တို့မှ ကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။
News, Opinion | comments (0)
“ဂါလီဗာ၏ ခရီးစဉ်များ” ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့တာပါ၊ ဂါလီဗာ သင်္ဘောပျက်ပြီး လူသေးသေးလေးတွေရဲ့ တိုင်းပြည် “လီလီပွတ်” ကို ရောက်ရှိသွားပုံကို ၈ တန်း အင်္ဂလိပ်စာမှာ သင်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တော့ ဆရာမောင်ထင် (ကျွန်တော်အမှတ်မှားရင် ပြင်ပေးကြပါ။) ဘာသာပြန်ထားတဲ့ “ဂါလီဗာ၏ ခရီးစဉ်များ” စာအုပ်ကို ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း တိုင်းပြည်တွေကို ရောက်သွားတဲ့ စွန့်စားခန်းပုံပြင်လို့ပဲ သဘောထားခဲ့တာပါ။ နောက်မှ မြန်မာ စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ဒီခရီးစဉ်တွေရဲ့ တကယ့်ဆိုလိုရင်းကို ရေးရေးနားလည်လာပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ထားတာကိုလည်း ကြည့်ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ စာအုပ်ကိုပဲ ပိုသဘောကျပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ အိုင်းရစ် သရော်စာရေးဆရာကြီး၊ ကဗျာဆရာကြီး Jonathan Swift (November 30, 1667 – October 19, 1745) ရဲ့ masterpiece လက်ရာတစ်ခုပါ။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ တရားဝင် နာမည်ကတော့ “Travels into Several Remote Nations of the World, in Four Parts. By Lemuel Gulliver, FirstaSurgeon, and thenaCaptain of several Ships” ဖြစ်ပါတယ်။ 1726 ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး 1735 မှာ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြီး ထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ ပုံပြင်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပေမယ့် သရော်စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ သူ့ခေတ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေအကြောင်း၊ လူကုံထံဂုဏ်သရေရှိ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း၊ လူတွေရဲ့ ငါမှငါ ထင်တစ်လုံး ဖြစ်နေတာတွေ စတာတွေကို သရော်လှောင်ပြောင်ထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ထင်တစ်လုံးဖြစ်နေတဲ့ လူတွေကို နှိပ်ကွပ်ချင်လို့ လူ့အဖြစ်ကို အင်မတန်နိမ့်ကျသယောင် အရေးအဖွဲ့တွေလဲတွေ့ရမှာပါ၊ ဥပမာ “ဟွေနှင်း” ဆိုတဲ့ မြင်းတိုင်းပြည်မှာ လူတွေဟာ အောက်တန်းစား၊ အသိဥာဏ်နိမ့်ကျသူတွေ ဖြစ်နေပုံ စသဖြင့်ပေါ့။ ဖတ်နေရင်း တခါတလေတော့လဲ မခံချိမခံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သရော်စာအနုပညာ လက်ရာတစ်ခုပါ။ လိုအပ်ရင် အတိဿယ၀ုတ္တိအလင်္ကာတွေ သုံးရတာပါပဲ မဟုတ်လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ ကမ္ဘာကျော် ဂန္ထ၀င်လက်ရာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ခွင့်ရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်ပါတယ်။ တွေးချင်ရင် ဆန့်ပြီး တွေးစရာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ အားလုံး ခံစားကြည့်နိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (တချို့ နာမည်တွေကို ဖတ်ရတာတော့ အခက်အခဲတွေ့လိမ့်မယ်ဗျာ။ နောက်ပြီး 0ld English ဆိုတော့ လုံးစေ့ပါဒ်စေ့ နားလည်ဖို့လည်း အတော်ခက်ပါတယ်။)
Ebooks | comments (1)
ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက် အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ မြောက်နေ့၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည်နေ့မတိုင်မီမှာ စစ်အစိုးရက လွတ်လပ်တဲ့ သတင်းမီဒီယာများရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကို သတင်းအမှောင်ချထားဖို့ ကြိုးစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘယ်တော့မှ နအဖရဲ့ ယုတ်မာမှုအောက်မှာ ကျဆုံးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု တိုက်ခိုက်ခံရရင် အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တွေက ပြည်သူကို အလင်းပြမယ်။ နောက် ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂ်တွေက ပြည်သူအတွက် မှန်ကန်တဲ့သတင်းကို ဖော်ပြပေးကြမယ်။ ဘလော့ဂ်တစ်ခု အတိုက်ခိုက်ခံရရင် နောက်ထပ်ဘလော့ဂ်နှစ်ခုက၊ နောက်ထပ် ဘလောဂ်အခု ၂၀ က ပြည်သူ့အတွက် အလင်းပြမီဒီယာတွေဖြစ်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှမကျဆုံးဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ အခုလတ်တလော အတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ ယာယီဘလော့ဂ်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ “စစ်အစိုးရ၏ ဆိုက်ဘာစစ်ဆင်ရေး” ဆိုတဲ့ သတင်းလေးကို ပြန်လည်တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ကြိုတင်ခွင့်မတောင်းနိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွတ်ဖို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ | စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈
၁၉၈၈ ခုနှစ် ကျောင်းသားများဦးဆောင်ခဲ့သော ဒီမိုကရေစီရေးအုံကြွမှုကြီးကို နှိမ်နင်းခဲ့သည့် စစ်အာဏာ သိမ်း အထိမ်းအမှတ်နေ့အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊၂၀၀၇ ခုနှစ် ရဟန်းသံဃာတော်များဦးဆောင်ခဲ့သည့် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့သော အထိမ်းအမှတ်နေ့အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စစ်အစိုးရသည် ဧရာဝတီ အပါအဝင်ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာသတင်းဌာနများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် website များကို ထပ်မံ တိုက်ခိုက်ပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း စစ်အစိုးရ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ပြည်ပအခြေစိုက် အင်တာနက် သတင်းဌာနများ၊ ဘလော့ဂါများ၊ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက်များက မိနစ် မဆိုင်း သတင်းအချက် အလက်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကို ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သည်။ ဤ ထုတ်ပြန်ချက်များကို အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာသတင်း ဌာနကြီးများမှတဆင့် ကမ္ဘာ့လူထုက ကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့သည်။ ယခုအခါ စစ်အစိုးရက လက်စားချေ တုံ့ပြန်သည် ဟု ယူဆရသည်။
အင်္ဂါနေ့မှစ၍ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ဆက်သွယ်မှုနှုန်းများကို စစ်အစိုးရကလျှော့ချခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကဖေး များကလည်း လုံခြုံမှုမရှိတော့၊ လာရောက်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်အစစ်ခံရပြီး ရဟန်းသံဃာတော် များဆိုလျှင် စစ်ထောက်လှမ်းရေးများက ရာဇာဝတ်သားသဖွယ်ပြုမှုဆက်ဆံကြောင်း သိရှိရသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှစ၍ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ မလေးရှားရှိ စာဖတ်ပရိသတ်များက ဧရာဝတီ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု၍ မရတော့ဟု အကြောင်းကြားလာသည်။ များမကြာမီ ဧရာဝတီ ဝက်ဘ်ဆိုက် သိုမှီးရာ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အကြီးဆုံးဆာဘာဖြစ်သော I– NET က မိမိတို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို(DDoS)ဖြင့် တိုက်ခိုက် ခံရကြောင်း အကြောင်းကြားလာသည်။ နောက်ဆုံး မိမိတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖြုတ်သိမ်းရန် I-NET က ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည်။
မိမိတို့ဧရာဝတီ အရံဝက်ဘ်ဆိုက် mirror site ကိုလည်း ထပ်မံတိုက်ခိုက်လာရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်သိုမှီးရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် Singlehop အနေဖြင့် ဧရာဝတီဆိုက်ကို ဖြုတ်သိမ်းလိုက်ရသည်။ Singlehop က ယခုတိုက်ခိုက်မှုမှာ အင်မတန်မှအဆင့်မြင့်ကြောင်း ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအနေဖြင့် ဆိုက်ဘာ စစ်ဆင်ရေးနည်းပညာများသင်ကြားရန် ရုရှနိုင်ငံသို့ ကျောင်းသားများ စေလွှတ်နေသည်မှာ လူအများအသိပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံတကာရှိ ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူ များကို ဈေးကြီးပေး၍ ငှားရမ်းအသုံးပြုကြောင်းလည်း ကြားသိနေရသည်။ ယင်းရာဇဝတ်ကျူးလွန်သူများမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျပန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများတွင် အခြေစိုက်သည်ဟု ယူဆရသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် အနှစ်၂၀ ကြာပြီးနောက် ၎င်းတို့၏စစ်မြေပြင်ကို မြို့ပြလမ်းမများ၊ တောတွင်းတိုက်ပွဲများမှ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ကွန်ယက်ထဲသို့လည်း ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ဧရာဝတီအပါအဝင် လွတ်လပ်သောသတင်းဌာနများအနေဖြင့် လက်မှိုင်ချအရှုံးပေးသွားမည် မဟုတ်ပေ။
စစ်အစိုးရ၏ ကြေးစားရာဇဝတ်သားများ အနေဖြင့် အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကွန်ယက် ထဲသို့ဝင်ရောက် ဖျက်ဆီးနိုင်ကောင်း ဖျက်ဆီးနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့၏ သံန္နိဌာန်ကိုမူ ဖျက်ဆီး၍မရနိုင်ပေ။
ယခုအခါ ဧရာဝတီစာဖတ်ပရိတ်သတ်များအနေဖြင့် နေ့စဉ်ပုံမှန်ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဧရာဝတီဘလော့ ကို ယာယီပြုလုပ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၂ နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ၆၃ ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံကို မနေ့က (၁၆ စက်တင်ဘာ) စတင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ အထွေထွေညီလာခံဖွင့်ပွဲကတော့ ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ ဥက္ကဌသစ်က “ပိုပြီး ဖိအားပြင်းထန်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့ပြဿနာတွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နဲ့ (အဖွဲ့နိုင်ငံ) အများစုရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို အနည်းစုက မလွှမ်းမိုးနိုင်ရေးအတွက်” ကုလသမဂ္ဂကို ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ဆော်သြလိုက်ပါတယ်။
ဥက္ကဌအသစ်ဖြစ်တဲ့ နီကာရာဂွာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Miguel D’Escoto Brockmann က “ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့ လူများစုကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံမှု၊ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေနဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ဆောင်ကျဉ်းပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂအပေါ်ထားရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ကျွန်တော် အလေးဂရုပြုမိပါတယ်” လို့ သူ့မိန့်ခွန်းမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။ သူဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူရမယ့် နှစ်အတွင်းမှာ ဒီ အဖိနှိပ်ခံ၊ အဆုံးရှုံးခံ လူများစုကြီးရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် မြုတ်နှံဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့လဲ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂကို ဒီမိုကရေစီကျအောင်လုပ်မှပဲ ဒီအဖွဲ့ကြီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရေးအပါဆုံးနဲ့ မရှိမဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပြည်သူများက အမှန်တကယ်လိုလားတောင်းဆိုနေကြတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအဆင့်ကို ရရှိအောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောသွားပါတယ်။
ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အဖွဲ့အရွယ်အစားနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း ပြင်ဆင်ရမယ်။ ဒါဟာ ကုလသမဂ္ဂအတွက် အဆောတလျှင် ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
“ဗီတိုအာဏာ အထူးအခွင့်အရေးရထားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အင်မတန်အရေးပါတဲ့သူတွေလို့ အထင်ရောက်နေပြီး ဒါဟာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အကျိုးဆက်ကို မစဉ်းစားပဲ သူတို့ကြိုက်ရာ ထင်ရာလုပ်နိုင်ဖို့ အပ်နှင်းထားတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ ထင်မြင်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်” လို့လည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
အခုမိန့်ခွန်းဟာ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဗီတိုအာဏာသုံးစွဲခွင့်ရထားတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်လိုက်တဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ UN ကို reform လုပ်ဖို့ အသံတွေထွက်လာတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဒီမိုကရေစီ စတာတွေကို ဆောင်ကျဉ်းပေးဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ကြီးကိုယ်၌ကိုက ဒီမိုကရေစီစနစ်မထွန်းကားတာ လူရယ်စရာပါ။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ လိုလားချက်တွေကို ဗီတိုအာဏာသုံးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုက ပယ်ချနိုင်တယ်ဆိုတာ အော်တိုကရေစီ မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာ။
ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတိုင်းက မျှော်လင့်အားထားနေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ ဒီမိုကရေစီကို ကျင့်သုံးတဲ့ စံပြအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က စံပြမလုပ်နိုင်ပဲ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မကျင့်သုံးနိုင်ပဲ သူတပါးကို ကျင့်သုံးခိုင်းဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ စကားမပီတဲ့ သီချင်းသင်ပေးတဲ့ဆရာက “ငါရှိုသလို မရှိုနဲ့၊ နင်တို့ ရှိုတက်သလိုရှို” ဆိုတာလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။
၁၉၈၉ မှာ Francis Fukuyama က အက်ဆေးတစ်ပုဒ်မှာ The End of the History သမိုင်းနိဂုံးချုပ်ပြီလို့ သူကပြောပါတယ်။ ထောက်ခံသူတွေ မထောက်ခံသူတွေ ဝေဖန်သူတွေနဲ့ အတော်လေး ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူက လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီသာ လူသားတို့ အိုင်ဒီအိုလော်ဂျီဆင့်ကဲတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ အဆုံးမှတ်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပိတ် စကာတင်ကျန်ခဲ့မယ့် လူသားအစိုးရပုံစံဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲ အဆုံးသတ်သွားမှုနဲ့ ဗဟိုအာရှနိုင်ငံများ၊ တောင်အမေရိကနိုင်ငံများနဲ့ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများရဲ့ ဒီမိုကရေစီသို့ တိမ်းညွတ်လာမှုတွေကို ရည်ညွှန်းပြီး အိုင်ဒီအိုလော်ဂျီတိုက်ပွဲ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီ၊ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီသာ နောက်ဆုံးလူသားတို့ တညီတညွတ်တည်း လက်ခံလာမယ့် တစ်ခုတည်းသော အိုင်ဒီအိုလော်ဂျီဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာတော့ အိုင်ဒီအိုလော်ဂျီတိုက်ပွဲဟာ အဆုံးသတ်သွားပြီလို့ ကျွန်တော်တော့ မမြင်ပါဘူး။ သူရည်ညွန်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများဟာ backwards နောက်ပြန်သွားနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ တရုတ်ပြည်ဟာလည်း လစ်ဘရယ်ဒီမို ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရုရှားဟာလည်း လစ်ဘရယ်လမ်းကြောင်းကနေ သိသိသာသာကြီးကိုလွဲချော်ပြီး အော်တိုကရေစီဘက်ကို ပြန်သွားနေတာ တွေ့ရမှာပါ။ အခုနောက်ဆုံး ဂျော်ဂျီယာကိစ္စမှာ ရုရှားရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံဟာ ဒီမိုကရေစီကို အတိအလင်း စိန်ခေါ်မှုလို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Fukuyama ရဲ့ အက်ဆေးရေးသားနေချိန်မှာပဲ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အတိုးတက်ဆုံး၊ စည်းကမ်းအသေ၀ပ်ဆုံး၊ တည်ငြိမ်မှုအရှိဆုံးဆိုတဲ့ စင်္ကာပူမှာ လစ်ဘရယ်ဒီမိုမဟုတ်ပဲ အီလီဘရယ် ဒီမိုကရေစီ(illiberal democracy) ကို ကျင့်သုံးနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူများ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မကျင့်သုံးနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်အခု Miguel D’Escoto Brockmann ပြောသလိုများ ကုလအဖွဲ့ကြီးမှာ ဒီမိုကရေစီကို တကယ်ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ရင်၊ ကုလသမဂ္ဂကို ဒီမိုကရေစီဇာတ်သွင်းပေးနိုင်ရင်တော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းဟာ ယခုထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အချိန်ရခဲ့ရင် ဒီအကြောင်းနဲ့စပ်ဆက်ပြီး Thomas Lauren Friedman ရဲ့ The World Is Flat ဆိုတဲ့စာအုပ်အကြောင်း ဆက်ပြီးဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။
Ideology, News | comments (0)
ဒီနေ့တော့ဗျာ သီချင်းလေးတွေနားထောင်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ ဒီသီချင်းလေးကို ပို့စ် တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို Robbie Williams နဲ့ Nicole Kidman တို့ရဲ့ MTV မှာ ပထမဆုံးနားထောင်မိပြီး ကြိုက်သွားတာပါ။ နောက်တော့ ဒီသူချင်းကို အရင်သီဆိုသူတွေဖြစ်တဲ့ Frank နဲ့ Nancy Sinatra တို့ကို နားထောင်မိတော့ သူတို့ကိုတောင် ပိုကြိုက်မိသလိုပဲ။ ကိုကိုကာလသားတွေအကြိုက် ဟောလီးဝုဒ် နာမည်ကြီးမင်းသမီး နစ်ကိုးလ်ကစ်ဒမင်း ကိုတော့ ကျွန်တော်သိသလောက် သူသီချင်းဆိုတာ ဒီတစ်ပုဒ်ပဲရှိသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုသွားနိုင်တာတွေ့ရတော့ သူတို့တစ်တွေရဲ့ အနုပညာဗီဇကို လေးစားမိပါတယ်။ သူ့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ကျွန်တော် The Others ကိုတော့ တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာ။ မြန်မာအယူအဆနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်နော်။ ဒီသီချင်းရဲ့ စာသားလေးတွေကိုလည်း ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Play icon လေးကို နှိပ်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
Music | comments (0)
TIMES NEWS_ 15 Sept 2008
ဇင်ဘာဘွေသမ္မတ Robert Mugabe နဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တို့ဟာ သဘောတူညီမှုတစ်ရပ်ကို လတ်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါပြီ။ အဲဒီ သဘောတူညီချက်အရ ဆယ်စုနှစ်သုံးခုနီးပါး သမ္မတရာထူးကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မူဂါဘီဟာ သူ့ရဲ့ အာဏာတစ်ချို့ကို ခွဲဝေပေးရမှာဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက်စလုံးကတော့ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဖေါ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
မူဂါဘီဟာ သူ့ရဲ့သမ္မတရာထူးမှာ ဆက်လက်တည်မြဲနေမှာဖြစ်ပြီး အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Morgan Tsvangirai ကတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကို ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ တောင်အာဖရိကသမ္မတ Thabo Mbeki ကပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒီရလဒ်ဟာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖွဲ့ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသမ္မတ အမ်ဘီကီ ကြားဝင်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့ သုံးလကြာ ခက်ခဲတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများရဲ့ အသီးအပွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက်မှတ်ထိုးပွဲကို Southern African Development Community (SADC) ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၁၄ နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ တူညီတဲ့လမ်းကြောင်း တူညီတဲ့ခရီးလမ်းကိုပဲ လျှောက်လှမ်းကြရမှာပါ” လို့ သမ္မတမူဂါဘီက လက်မှတ်ထိုးပွဲအပြီးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ဒီကနေ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ စတင်တဲ့နေ့များလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ကိုယ်တိုင်မသိကြပဲ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အသိအမှတ်မပြုကြပဲ လမ်းတစ်ကြောင်းထဲပေါ်မှာ လျှောက်နေခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံသားတွေပါ။ တခြားလျှောက်စရာလမ်း လိုက်စရာလမ်းမရှိပါဘူး။ သမိုင်းကပဲ ကျွန်တော်တို့ကို တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းကို လျှောက်စေတာပါ။”
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Tsvangirai ကတော့ သူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ “ဒီသဘောတူညီချက်မှာ ပါဝင်တဲ့အချက်တွေအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တိုင်းပြည်က ကျွန်တော်တို့ကို စောင့်ကြည့်နေပါတယ်” လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။ သူက “နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံး လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အဖြေတစ်ခု”ရဖို့ သမ္မတမူဂါဘီရဲ့ အားထုတ်မှုကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ သူက အာဖရိကခေါင်းဆောင်များနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခေါင်ဆောင်များကိုလည်း “အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခု ငတ်မွတ်မွဲတေနေပြီး ဖရိုဖရဲ ဗရမ်းဗတာဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေပဲ တာဝန်ရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုတဲ့အတွက်” ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။
Tsvangirai က ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံသားတွေဟာ အခုဆိုရင် “တိုင်းပြည်စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ရှေ့ဆက်ချီတက်ကြမလား” ဒါမှမဟုတ်ရင် တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး “ကျဆုံးခြင်းချောက်နက်ထဲကို ထိုးဆင်းပြီး ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အနေအထား”ကို သွားမလားဆိုတဲ့ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခု ရှိလာပြီလို့ ပြောပါတယ်။
သူက ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း “မိမိတစ်ပါတီအကျိုးစီးပွားကို ကျော်လွန်ပြီး စုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြမှု“ အတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ “ခင်ဗျားတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတိတ်ကရန်သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒီကနေ့မှာတော့ တူညီတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ရဲ့အလိုအရ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာအတွက် တစ်သားတည်းပေါင်းစည်းမိကြပါပြီ” လို့လည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒီသဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့ကတည်းက ကြေငြာခဲ့ပေမယ့် ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမတိုင်ခင်အထိတော့ အသေးစိတ်ကို ထုတ်ဖော်ကြေငြာခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူး။ အခုသဘောတူညီမှုအရ မူဂါဘီဟာ သမ္မတဖြစ်ပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌရာထူးကို ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ Tsvangirai ကတော့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကြီးကြပ်မယ့် “၀န်ကြီးအဖွဲ့ကောင်စီ”ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ရာထူးကို ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
EU ကတော့ ဒီသဘောတူညီချက်ကို ကြိုဆိုခဲ့ပေမယ့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကို ရုတ်သိမ်းဖို့ကတော့ နောက်လမှ စဉ်းစားကောင်း စဉ်းစားမယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးရာပေါ်လစီအကြီးအကဲ Javier Solana ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သမ္မတမူဂါဘီဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းတွေက လွန်မြောက်ဖို့နဲ့ အာဏာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ စစ်မှန်ရိုးသားမှုကို ပြသနိုင်မယ်ဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေဆီက ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို မျှော်လင့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇင်ဘာဘွေဟာ တရားဝင်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ရာခိုင်နှုန်း ၁၁ သန်း (11 million percent) နဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငွေကြေးအဖောင်းပွဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တခြားလွတ်လပ်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ တကယ်တမ်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဟာ ရာခိုင်နှုန်း သန်း ၄၀ (40 million percent) ရှိနိုင်ပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလည်း တိုးလာနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
“Tsvangirai ဟာ အကြွင်းမဲ့အာဏာမရပေမယ့် အဓိကကျပြီးခိုင်မာတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ရရှိထားပါတယ်” လို့ အတိုက်အခံ ဥပဒေပညာရှင် David Coltart ကပြောကြားပါတယ်။ “ဒါဟာ သမိုင်းတွင်မယ့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဆိုတာ သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ရှည်လျားပြီး ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တက်တဲ့ ခရီးလမ်းရှည်ကြီးကို လျှောက်လှမ်းရဦးမှာပါ” လို့လည်း ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော အာဖရိကရဲ့ ဆူးတစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ ဇင်ဘာဘွေမှာတော့ သိသာထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ကုလသမဂ္ဂတို့ရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာလည်း တစ်ကြောင်းဖြစ်ပေမယ့် ပိုပြီးအရေးပါတဲ့အကြောင်းကတော့ Southern African Development Community (SADC) ရဲ့ တာဝန်သိမှုလို့ပဲ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကသမ္မတ Thabo Mbeki စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကြိုးစားပမ်းစား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးမှုတွေကြောင့် ဒီသဘောတူညီချက်ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေအားလုံးထက် ပိုပြီးအဓိကကျတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာတကယ်ထားမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လို့ စေတနာရှိလို့လားဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ဆက်လက်ရှုစားရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးလည်း ကိုယ်ကျိုးစီးပွားပဲမကြည့်ကြပဲ SADC လို တာဝန်သိစိတ်ရှိလာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒိန်းမတ်က စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာကြီး Hans Christian Andersen (April 2, 1805 – August 4, 1875) ရဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်ကလေးကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ဒီ Fairy Tales ဆိုတဲ့ နတ်သမီးပုံပြင်တွေဟာ စတင်ထုတ်ဝေစဉ်က ချက်ချင်းအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ကိုအဓိကကျော်ကြားစေခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဂန္ထ၀င်လက်ရာများဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာအံ့မောင်က “အန်ဒါဆင်းပုံပြင်များ” ဆိုပြီး မြန်မာပြန်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အကျော်ကြားဆုံးကတော့ “ဘဲရုပ်ဆိုးကလေး” ပုံပြင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ Disney က နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ကာတွန်းရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖန်တီးခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ ပုံပြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အခု စာအုပ်မှာ ပုံပြင်ပေါင်း ၁၈ ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာက ဒီ Collection မှာ “ဘဲရုပ်ဆိုးကလေး” ပုံပြင်က ပါမလာပါဘူး။ တခြား ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ပုံပြင်တွေကတော့ “သန်း၊ နှံကောင်နဲ့ ဖားတို့ရဲ့ အမြင့်ခုန်ပြိုင်ပွဲ” “ရေသူမကလေး” “ဘုရင်ကြီးရဲ့ ၀တ်လဲတော်အသစ်” စတဲ့ပုံပြင်တွေပါပဲ။၊ အားလုံးနှစ်ခြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီမှာ download လုပ်ပါ။
Ebooks | comments (0)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တောင်းဆိုချက်များကို စစ်အစိုးရလိုက်လျော
NEJ News မှ ပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။
ပီတာအောင် / ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် တားဆီးမိန့် အယူခံဝင်နိုင်ရေးကိစ္စမှလွဲ၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသူတဦး ရသင့်သည့် အခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုထားမှုကို စစ်အစိုးရက လိုက်လျောလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ပြောသည်။
ယမန်နေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိသားစုရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထပ်မံသွားရောက်တွေဆုံခဲ့ပြီးနောက် ဦးကြည်ဝင်း၏ ပြန်လည်ပြောပြချက်အရ အန်အယ်လ်ဒီပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးဥာဏ်ဝင်းက “အားလုံးနီးပါးရပြီလို့ပဲ ပြောရမှာပဲ။ ရပါတယ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ လိုအပ် သလိုတော့ ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့။ ကျန်သေးတာကတော့ အယူခံကိစ္စပဲ။ အယူခံတရားဝင်တင်နိုင်ဖို့၊ တရားဝင်အယူခံဖို့ ဒါတွေက လုပ်နေဆဲတန်းလန်းပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အပြင်ကအစား အစာ ပြန်ပြီးလက်ခံတော့မယ့် အနေအထားလို့ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုလက်ခံမလဲ ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတွေ့ပြီးရင် ရိက္ခာသွင်းဖို့ကိစ္စတွေ အဆင်ပြေပြေ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေး အပြင်ပန်းအားဖြင့် ကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနှင့်တွေ့ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံထားသည် ဟုလည်း ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ နေထိုင်သည့် ဒေါ်ခင်ခင် ၀င်းတို့သားအမိကိုလည်း အာဏာပိုင်များက မနက် (၆) နာရီမှ ည (၆) နာရီအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ကို သဘောတူလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အယူခံဝင်ရေးကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းတို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီး ဦးကြည်ဝင်း၏ လက်ထောက်အဖြစ် ဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် ဦးလှမျိုးမြင့်တို့ (၂) ဦးကို ခန့်ထားခွင့်တောင်းခံ ထားရာတွင် အာဏာပိုင်တို့က ဦးလှမျိုးမြင့်ကိုသာ ခွင့်ပြုပြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းသည် အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ၀င်ဖြစ်နေသဖြင့် ပါတီနှင့် မဆက်သွယ်ရဆိုသည့် မူလကန့်သတ်ထားချက်အရ ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိ ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မူလကန့်သတ်ခံနေရသည့် တားဆီးမိန့် ဥပဒေနှင့်မဆိုင်ဘဲ ပိတ်ပင်ခံ ထားရသည့် မိသားစုထံမှ ပေးစာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ သွင်းယူခွင့် အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိက ရပိုင်ခွင့်များရရှိရန် ပြီးခဲ့သည့်လကတည်းက အာဏာပိုင်များထံ တင်ပြတောင်း ဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့တောင်းဆိုနေစဉ်အတွင်း ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းကိုသာ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြင်ပ အစားအစာ ပေးပို့သည့် အ၀ယ်တော် ကိုမြင့်စိုး၊ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်၊ နအဖ ဆက်ဆံရေး ၀န်ကြီးတို့ သာမက သူမ၏ မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကိုပါ လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်းမပြုခဲ့ပေ။
ကုလဆုံးဖြတ်ချက် စစ်အစိုးရလိုက်နာရန် ဂမ်ဘာရီတိုက်တွန်း
VOA News 12 Sept 2008
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေး မစ္စတာအီဘရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီ (Mr. Ibrahim Gambari) ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် မအောင်မြင်ဘူးလို့ သူမယူဆတဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) က မနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီက အဲဒီခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မနေ့က ရှင်းလင်းတင်ပြရာမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်တာ မရှိဘူးလို့ တင်ပြပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက စုစည်း
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက သူမျှော်မှန်းထားသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ မတွေ့ရလို့ အများနည်းတူ သူလည်း အားမလို အားမရ ဖြစ်ရတယ်၊ လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်တာတွေ အပါအ၀င် ဘက်ပေါင်းစုံက
ပါဝင်သင့်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပြီး အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ရေရာသေချာတဲ့ ခြေလှမ်း တွေလှမ်းတာကို တွေ့မြင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ မနေ့က ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်မှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အီဘရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ် မအောင်မြင်ဘူးလို့ အများက သုံးသပ်ကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက အခုလိုပြောပါတယ်။
"မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင် လူတိုင်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေကြသလိုပဲ ကျနော်လည်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ် မအောင်မြင်ဘူးလို့တော့ ကျနော်မယူဆပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ သံရေးတမန်ရေး လမ်းကြောင်းတွေ အားလုံးကနေ
ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ပစ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သူမအောင်မြင်ဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။
"ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက မစ္စတာဂမ်ဘာရီကို ပေးအပ်ထားတဲ့ တာဝန်အတိုင်း တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့အထိ ကျနော်တို့ ဆက်ကြိုးစားသွားကြမှာပါ။ မနက်ဖြန် မွန်းလွဲပိုင်းမှာ မြန်မာ့မိတ်ဆွေများ နိုင်ငံတွေရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ သံအမတ်ကြီးအဆင့်
ဆွေးနွေးပွဲတခု ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သြဇာညောင်းတဲ့ အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကျနော်ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားဦးမှာပါ။"
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အီဘရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီကလည်း မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အစီရင်ခံ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအပြီး ကုလသမဂ္ဂနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမှာလည်း အလားတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကို သူအကြံပြုခဲ့တယ်လို့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီက ပြောပါတယ်။
"မြန်မာအစိုးရက ကျနော့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကို လက်ခံခဲ့ပေမယ့် ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ကျနော့်ရဲ့အဆိုပြုချက်တချို့နဲ့ နောက်ဆုံးတခေါက် ခရီးစဉ်အတွင်း ကျနော်အဆိုပြုခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း မြန်မာအစိုးရက ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အတော်
လိုနေပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့၊ အစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ ဆိုတဲ့အချက်တွေ မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အဓိက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတာတွေနဲ့ အကြံပြုတာတွေကို မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီအချိန်မှာ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။"
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေက သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးတခေါက် ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရော စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ပါ မတွေ့ခဲ့ရလို့ အားလုံး စိတ်ပျက်ကြတဲ့
အကြောင်း ပြောကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုလည်း လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက စိတ်ပူနေကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီတခေါက် သူ့ကို ဘာဖြစ်လို့ လက်ခံမတွေ့တာလဲလို့ သတင်းထောက်တွေက မေးရာမှာတော့ …
"ရိုးသားစွာဝန်ခံရရင် ဘာကြောင့်မှန်းမသိပါဘူး။ အရင်ခရီးစဉ်တွေမှာ ကျနော်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့တုန်းက ပြောခဲ့တာတွေနဲ့ ကွဲလွဲနေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၇ ကြိမ် တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခရီးစဉ် ၅ ခေါက်မှာ တခေါက်က ၂ ကြိမ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူနဲ့အစိုးရကြား ဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာမှာ ကုလသမဂ္ဂက အချက်အချာကျကျပါဝင်တာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ခံထားပါတယ်။ နောက် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရေးကိုလည်း လိုလားပါတယ်။
"ကျနော့်ကိုတွေ့ဖို့ ငြင်းတာ၊ သူ့ရှေ့နေကလွဲလို့ ဘယ်သူနဲ့မှ မတွေ့ဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာ့ကြောင့်လဲ မသိရပေမယ့် အားလုံးလိုပဲ သူလည်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ သူ့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတာ ဥပဒေကြောင်းအရ ခုခံကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကိုလည်း ကျနော်တို့ နားလည်ပါတယ်။"
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လက်ရှိအနေအထားကိုရော အန်န်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ၊ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတာတွေကိုပါ သူ လုံခြုံရေးကောင်စီကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီက ပြောပါတယ်။
"အန်န်အယ်လ်ဒီ အမှုဆောင်လူကြီးတွေနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့တော့ စစ်အစိုးရနဲ့ကျနော် ဆွေးနွေးမယ့် ၅ ချက်အနက် ၄ ချက်ကို သူတို့ သဘောတူပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအချက်ကို သူတို့ သဘောမတူဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဥပဒေ
ကြောင်းအရ တရားမ၀င်တာကြောင့် အန်န်အယ်လ်ဒီက လက်မခံဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်း လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း လုံခြုံရေးကောင်စီကို တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
"ဒါပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက ချမှတ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီတွေပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ အန်န်အယ်လ်ဒီရဲ့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရတာ
တွေကို အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာတခု သတ်မှတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အစိုးရအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် မျှော်လင့်ပါတယ်။"
မစ္စတာဂမ်ဘာရီအနေနဲ့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကို ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေသေးသရွေ့ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ မအောင်မြင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်တဲ့အကြောင်း မစ္စတာဂမ်ဘာရီက ဖြေဆိုသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ မြန်မာ့အရေး ကြိုးစားနေတာ မအောင်မြင်လို့
တခြားလူတယောက်နဲ့ အစားထိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကတော့ ထွက်ပေါ်နေဆဲပါပဲ။
Credentials Challenge ကန့်ကွက်စာကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးကနေ အထွေထွေညီလာခံကို လွှဲပေးလိုက်ပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂက မနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို VOA မှာလည်းဖတ်ရ၊ BBC မှာလည်းနားထောင်ရ၊ NEJ မှာလည်းဖတ်ရ၊ ဘလော့ဂ်တွေ ရှောက်ဖတ်ကြည့်တော့လဲ တွေ့ရနဲ့ ကျွန်တော့စိတ်ထဲ ကလိလိဖြစ်စရာတစ်ခုကို ဖတ်တိုင်းဆွပေးနေသလိုဖြစ်နေလို့ အခုထုတ်ရေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မအောင့်နိုင်တော့တဲ့ အောင့်လုံးပေါ့။
ဒီကန့်ကွက်လွှာကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ (NCUB) နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ (MPU) တို့က ဦးဆောင်ပြီးတင်ပါတယ်။ MPU ရဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဒေါ်စန်းစန်းက လက်မှတ်ထိုးပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အဝေးရောက် အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ကတော့ ဒီကန့်ကွက်လွှာကို လက်မှတ်မထိုးခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘ၀င်မကျတဲ့အချက်ကို မပြောခင် တစ်ခုတော့ကြိုတင်ပြောထားချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုပြောတာတွေဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ တဘက်သတ်အမြင်၊ မပြည့်စုံတဲ့အမြင်ပါ။ ကျွန်တော်မြင်မိသလောက်ကလေးကို ပြောချင်တာပါ။ မှားချင်လည်းမှားမှာပါ။ ဥပမာပြောရရင် ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ဗျာ... ကျွန်တော်ရေဆေးပစ်မယ့် ခွက်ကလေးတစ်ခုထဲဝင်နေတယ်။ ရေဆေးချလိုက်ရင် ရေထဲမျောပါသွားပြီးသေမှာစိုးလို့ ကျွန်တော်က ခွက်ကို ခေါက်ချတယ်။ ကိုယ်တော်က အတင်းတွယ်ကပ်နေတယ်။ သူသေမှာသူမသိဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက အဲဒီလိုပါ။ ကျွန်တော်က ပုရွက်ဆိတ်ထက် အများကြီးပိုမြင်နိုင်တဲ့သူဆိုတော့ သူသေမှာကိုသိတယ်။ သူကတော့ အခုကျွန်တော် သူ့ကိုခေါက်ချနေတာဟာ သူ့ရပ်တည်မှုကို စိန်ခေါ်တာပဲ။ သူရပ်တည်နေတဲ့နေရာလေးက ပြုတ်ကျမသွားအောင် သူကြိုးစားတယ်။ သူ့အသိဟာ မပြည့်စုံဘူး။ ကျွန်တော် ရပ်တည်နေတဲ့ paradigm နဲ့ သူ့ paradigm မတူဘူး။ သူဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်ဘူး။ ပြောချင်တာက အဲဒါပါ။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့် ပါရာဒိုင်းထဲကနေ ပြောတာပါပဲ။ တစ်ခုရှိတာကတော့ မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်အယူအဆကိုတော့ ဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ် မဟုတ်လား။ ပြောသမျှ၊ ရေးသမျှတော့ အမှန်ကြီးပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သို့သော် အဆိပ်အတောက် မဖြစ်ရင်တော်ရဲ့လို့ ထင်တာပါပဲ။ ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ရဲ့ အမြင်ပေါ့။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲစပြီး အစာမကြေတဲ့အချက်ကတော့ ဘာကြောင့် MPU ရဲ့ ဥက္ကဥကိုယ်တိုင်လက်မှတ်မထိုးပဲ ဒုဥက္ကဌကထိုးတာပါလဲ။ နောက် NCGUB ဦးစိန်ဝင်းတို့က ဘာကြောင့်လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ ငြင်းဆန်တာလဲ။ ဦးစိန်ဝင်းရဲ့ စကားလေးတွေ ဖတ်ကြည့်ရအောင် ...။
"ဒီကိစ္စကို စဆွေးနွေးကတည်းက ကျနော်ရှင်းပြပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အနေအထား၊ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ၊ မဖြစ်နိုင်ချေ၊ လုပ်တဲ့အခါမှာ ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ၊ စသည်အားဖြင့် ကျနော်တို့ သေချာရှင်းပြပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အခင်းအကျင်းတွေလည်း ကျနော်တို့ ရှင်းပြပါတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီ Credential Challenge ကို လက်မှတ်ထိုးရမယ့်အလုပ်တွေ၊ Credential ကော်မတီကို Apply လုပ်ရမယ့်အလုပ်မျိုးတွေကို မလုပ်ဘူးဆိုပြီး ပြောပြီးသားပါ။"
"နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ နအဖပဲဖြစ်ဖြစ်၊ န၀တပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့က တရားမ၀င်တဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမှာမထိုင်သင့်ဘူး၊ ကျနော်တို့ ဒီအပေါ်မှာတော့ ထောက်ခံတယ်။ သို့သော် ကျနော်တို့ရဲ့အမြင်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ မူဝါဒ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ တွက်ချက်မှုအရ ဒီလို Credential
ကိစ္စတွေမှာ မပါဘူး။ Campaign အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ပြဿနာမရှိဘူး။ အဲတော့ ဒီလိုလုပ်ရင်လည်း ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးဆိုပြီး ကျနော်ပြောတာပါ။"
ဦးစိန်ဝင်းတို့အနေနဲ့ နအဖဟာ တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ကြောင်း ထောက်ခံတယ်။ ကုလသမဂ္ဂမှာ နေရာမရသင့်ဘူးဆိုတာလည်း လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် Credential ကို ချဲလင့်လုပ်တဲ့အခါ မပါဝင်တာလဲ။ NCGUB ရဲ့ အနေအထားအရလို့ပြောပါတယ်။ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရင် NCGUB ရဲ့ image ကို ဘာများထိခိုက်သွားစရာရှိပါသလဲ။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရက် လျှောက်လုပ်နေတဲ့ မယောင်ရာဆီလူး သူတွေလို့ အပြောခံရမှာစိုးလို့ပါလား။
နောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တွက်ချက်မှုအရလို့ ပြောသွားပါတယ်။ NCGUB ရဲ့ တွက်ချက်မှုက ဘာတွေများပါလဲ။ နောက် ဒါဟာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးပါ။ ပါတီနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူး။ သေချာပေါက်နိုင်မှ လုပ်မယ်ဆိုရအောင် အမြတ်ရဖို့ gambling လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သေချာပေါက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှ၊ နိုင်ခြေရှိမှလုပ်မယ်ဆိုရင် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးလဲ ပေါ်ပေါက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလည်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရှင်ကို နိုင်ခြေရှိမှ ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုရင် ခေတ်အဆက် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ ရဟန်းရှင်လူခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လိုမှ ထွက်ပေါ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အခုလက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ အဖမ်းဆီး အနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ မျိုးဆက်သစ် မျိုးဆက်ဟောင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ နိုင်ခြေမရှိမှန်းသိရက်၊ အဖမ်းဆီး အနှိပ်စက်ခံရမယ်မှန်းသိရက်နဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အသက်ပေးပြီး စွမ်းဆောင်နေကြသူတွေပါ။ ဒီလူတွေကို NCGUB အနေနဲ့ လေးစားသင့်ပါတယ်။
"ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာကို ကျနော်တို့နည်း ကျနော်တို့ဟန်နဲ့ ရှင်းနေပါတယ်။ Publicly ရေဒီယိုကနေ မပြောချင်လို့ ကျနော်မပြောတာ။ နောက်တခုက ကျနော်တို့ရဲ့အရေးကို နိုင်ငံတကာက အစအဆုံး ဖြေရှင်းပေးမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ မှားယွင်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ မပေးသင့်ဘူး။ ပြည်ပက ကူညီတယ်၊ သိပ်ကောင်းတယ်၊ အခုထိလည်း ပြည်ပက အကူအညီတွေကို ရနေတယ်၊ ဒါကိုလည်း ကျနော်တို့ ကြိုးစားရမှာပဲ။ သို့သော်လည်း တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အစအဆုံးကတော့ ပြည်ပက လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ၊ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားတွေ အားလုံး လုပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အဲတော့ ဒီကိစ္စက စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်မယ့်ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။"
အခုကိစ္စဟာ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ပြည်သူလူထုကို false hope ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ encourage လုပ်ပေးတာပါ။ ဒီ နအဖ မတရားမှန်း ပြည်သူတရပ်လုံးသိတယ်။ သူကြီးအရက်မူးပြီး နှစ်လုံးပြူးတစ်ယမ်းယမ်းနဲ့ သောင်းကျန်းနေတာကို ဂတ်တိုင်လည်းမထူးပါဘူး လို့မထားပဲ တစ်ယောက်ယောက်က သွားတိုင်ရင်တော့ တိုင်တန်းပေးမယ့်သူရှိပါသေးလားဆိုပြီး အားရှိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီ ချဲလင့်ရဲ့ အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ အဝေးရောက် အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ လို့ အမည်ခံထားတဲ့ ဦးစိန်ဝင်းတို့ အဖွဲ့က လက်မှတ်မထိုးတာပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက MPU ရဲ့ ဥက္ကဌကိုယ်တိုင် လက်မှတ်မထိုးပဲ ဒုဥက္ကဌကသာ လက်မှတ်ထိုး ထားတာပါ။ (ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော့ ဗဟုသုတအားနည်းလို့ မသိပါဘူး။ ဥက္ကဌက ဘယ်သူမှန်းလဲမသိပါဘူး။)
ဒေါက်တာစိန်ဝင်းပြောသလို တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ပြည်ပကအစအဆုံးကူညီမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ အားကိုးရမယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ အခုကိစ္စက အနှစ်၂၀ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်နေတာပါ။ နအဖဟာ ပြည့်သူ့အာဏာကို မတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ အာဏာရှင်တွေဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ အနှစ်၂၀အတွင်းမှာ တိုင်းပြည်ကို မွဲသထက်မွဲအောင်၊ နိမ့်ကျသထက်နိမ့်ကျအောင်၊ ချွတ်ခြုံကျအောင် နည်းအမျိုးနဲ့နှိပ်စက် ရဟန်းရှင်လူပေါင်းများစွာကို သတ်ဖြတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီကိုသွားနေပါတယ်လို့ ပြောပြီး လူထုကို နည်းအမျိုးနဲ့ဖိနှိပ်နေတာကို တကမ္ဘာလုံးသိနေပါပြီ။
စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေးမှာ ရဟန်းသံဃာတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပုံ၊ အခုချိန်အထိ ရဟန်းသံဃာတွေကို ဆက်လက်ဖိနှိပ်နေပုံ၊ နာဂစ်လေမုန်တိုင်းမှာ ကိုင်တွယ်ပုံတွေကြောင့် ကမ္ဘာက နအဖ ဘာလဲဆိုတာ ပိုပြီးသိလာပါပြီ။ ဒီအချိန်ဟာ နအဖကို ထိုးနှက်ဖို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။ တရားမ၀င်အာဏာကို မတရားရယူထားတဲ့ နအဖကို ကုလသမဂ္ဂမှာ နေရာမပေးဖို့ တောင်းဆိုတာဟာ အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ မအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ လုပ်ကိုလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်ကတည်းက ကျွန်တော် ဒီအတွေးကိုတွေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခုသိပ်ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို NCUB နဲ့ MPU တို့က ဦးဆောင်ပြီး လုပ်နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး တခဲနက်ညီညီညွတ်ညွတ် အားပေးရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြိုးစားမှုဟာ “စကတည်းက ယဉ်သကို” ဆိုသလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အကွဲအပြဲအက်ကြောင်းရာကလေးကို မြင်မိလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းပြောသလို အက်ကြောင်းမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Opinion | comments (0)
စစ်အစိုးရ ကိုယ်စားပြုမှု ကန့်ကွက်လွှာ အထွေထွေ ညီလာခံ ဆုံးဖြတ်မည်
VOA News 11 Sept 2008 မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကြာခင် ကျင်းပမယ့် ၆၃ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကနေ ကိုင်တွယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဘက်က မနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း အဲဒီလို ပြောကြား လိုက်တာပါ။ ဦးကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ပုံမှန် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအတွင်း သတင်းထောက်တွေက မေးကြတာတွေကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီး မီရှဲလ် မွန်းတာ့စ်က ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
“ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့က ဒီစာကို အထွေထွေညီလာခံရဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဆီ ပေးပို့တာပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်စားပြုမှုအပေါ် ကန့်ကွက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အထွေထွေ ညီလာခံကပဲ ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ အခုကိစ္စမှာတော့ ၆၄ ကြိမ် မြောက် ညီလာခံကနေ ကိုင်တွယ်ရမှာပါ။ အထွေထွေညီလာခံတိုင်းရဲ့အစမှာ ကိုယ်စားပြုမှု တရားဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကော်မတီရဲ့ အစည်း အဝေးကို ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲကနေ တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက တရားဝင်ကိုယ်စားပြုမှု တောင်းခံတဲ့အပေါ် အတွင်းရေးမှူးချုပ် က မှတ်ချက်တခုခု ပေး-မပေး မေးရာမှာတော့ မီရှဲလ် မွန်းတာ့စ်က အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ဘာမှတ်ချက်မှ မပေးတဲ့အကြောင်း အထွေထွေညီလာခံကပဲ ကိုယ်တွယ်သွားရမယ့်အကြောင်း ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အီဗရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီက သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နောက်ဆုံး ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကို အစီရင်ခံဖို့ရှိပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းမယ့် အကြောင်းလည်း မီရှဲလ် မွန်းတာ့စ်က ပြောသွားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရဟာ လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတာမဟုတ်ဘဲ အာဏာသိမ်းယူပြီး တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရ ဖြစ်တာကြောင့် တရားမ၀င်တဲ့အကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကသာ နိုင်ငံကို တရားဝင်ကိုယ်စားပြုခွင့်ရှိတဲ့အတွက် စစ်အစိုးရရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုကို ဖျက်သိမ်းပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ MPU ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ သမဂ္ဂရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန်းစန်း လက်မှတ်ထိုးပြီး အင်္ဂါနေ့ကပဲ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဆီ စာပို့ခဲ့တာပါ။
အစောပိုင်းမှာတော့ NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အဝေးရောက် အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရက လက်မှတ်ထိုး တင်သွင်းဖို့ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်သူတွေက တင်ပြခဲ့ပေမယ့် NCGUB က လက်မှတ်ထိုးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တာကြောင့် MPU အနေနဲ့ပဲ တင်သွင်း ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီကိစ္စကို လှုပ်ရှားနေသူတွေကတော့ ဘယ်သူကပဲ လက်မှတ်ထိုး တင်သွင်းသည်ဖြစ်စေ အရေးကြီးတာကတော့ မြန်မာ စစ်အစိုးရ ဟာ နိုင်ငံကို တရားဝင်ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစိုးရတရပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နိုင်ငံတကာကသိရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောကြကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
“လမင်းခင်” blog မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ လက်ရှိမြန်မာစစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုနေတာဟာ တရားဝင်မှု မရှိဘူးဆိုပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ (NCUB) နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ (MPU) တို့က ဦးဆောင်ပြီး ဒီကနေ့9Sept 2008 မှာ ကုလသမဂ္ဂကိုတင်သွင်းတဲ့ ကန့်ကွက်စာပါ။့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အဝေးရောက် အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ(NCGUB) ကတော့ ဒီကန့်ကွက်လွှာကို လက်မှတ်မထိုးခဲ့ပါဘူး။
စကော့ စာရေးဆရာ Robert Louis Stevenson (November 13, 1850–December 3, 1894) ရဲ့ ဒီဝတ္ထုကို ၁၈၈၆ မှာ ပထမအကြိမ်စတင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကျော်လှိုင်ဦးက “ဒေါက်တာဂျက်ကီးနှင့် မစ္စတာဟိုက်တို့၏ ထူးဆန်းသောအမှု” ဆိုပြီး မြန်မာဘာသာကို ပြန်ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။ ရောဘတ်လူးဝစ်စတီဗင်ဆန်ဟာ ၀တ္ထုရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ခရီးသွားစာပေရေးသားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အားနက်စ်ဟဲလမင်းဝေး၊ ရုယာ့ဒ်ကစ်ပလင်း တို့လို စာရေးဆရာတွေရဲ့ လေးစားမှုကို ခံယူရသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Treasure Island “ရတနာကျွန်း” ၀တ္ထုဟာ သူ့ရဲ့လက်ရာဖြစ်ပြီး သူ့ကို အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုတစ်အုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုစာအုပ်ဟာ လန်ဒန်က ရှေ့နေတစ်ဦးရဲ့ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်း ဖော်ရွှေခင်မင်တက်တဲ့ လူကြီးလူကောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဂျက်ကီးနှဲ့ လူမြင်သူမြင်မနေတက်ပဲ လူတွေကို မုန်းတီးနေတဲ့ မစ္စတာဟိုက်တို့ရဲ့ အမှုကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းပုံကို ရေးသားထားတာပါ။
ဒီစာအုပ်ဟာ “စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့မှုကြောင့် ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်တက်တဲ့ သဘာဝ” (psychopathology) နဲ့ “လူတစ်ကိုယ်ထည်းမှာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှစ်မျိုးကွဲခြင်း” (split personality) ဆိုတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အယူအဆတွေကို ဖော်ထုတ်ရေးသားထားတာကြောင့် ထင်ရှားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်း plot ကတော့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကို လမ်းမပေါ်မှာ ရက်ရက်စက်စက်နင်းခြေသွားခဲ့တဲ့ အရပ်ပုပြတ်ပြတ်နဲ့ မစ္စတာဟိုက်ဟာ ကလေးမလေးကို လှည့်တောင်မကြည့်ပဲ တံခါးတစ်ခုနောက်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားပုံ၊ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ သူပြန်ပေါ်လာပြန်ပြီး ကလေးမလေးရဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို လေးစားရလောက်တဲ့ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ချက်လက်မှတ်နဲ့ အလျော်ပြန်လာပေးပုံ ကနေစပြီး လူတကာလေးစားရတဲ့ ဒေါက်တာဂျက်ကီးနဲ့ ပုပြတ်ပြတ်ရုပ်ဆိုးဆိုး မစ္စတာဟိုက်တို့ရဲ့ ဆက်စပ်မှုကို ဇာတ်ရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ သယ်သွားတာတွေ့ရမှာပါ။
ဒီဝတ္ထုမှာ Stevenson ဟာ လူ့ရဲ့ မူလစိတ်သဘာဝမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ အကောင်းနဲ့အဆိုးကို ခွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပုံကို တင်ပြသွားတာပါ။ လူဟာ သူ့ရဲ့မူလစိတ်ဟာ အကောင်းချည်းမဟုတ်သလို အဆိုးချည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ နောက် လူဟာ ဆိုးချင်ပါသော်လည်း ဘာသာရေးအဆုံးအမ၊ ဥပဒေ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာ စတာတွေကြောင့် ထိန်းသိမ်းနေရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီလူရဲ့ မူလစိတ်ထဲက အဆိုးတွေအကုန်လုံးကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး အကောင်းတွေချည်းပဲ ထားခဲ့ဖို့ ဆေးပညာနဲ့ ဒေါက်တာဂျက်ကီးဟာ ကြိုးပမ်းခဲ့ပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူထင်သလို အကောင်းတွေချည်းပဲ မကျန်ခဲ့တဲ့အခါ၊ လူဟာ မကောင်းတဲ့စရိုက်၊ အထိန်းအကွပ်တွေမဲ့သွားတဲ့ စိတ်အခြေအနေကို သာယာလာတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာ သူ့ဝတ္ထုကိုပဲ ဖတ်ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဖတ်မိရင် လက်ကမချချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်အားကောင်းပါတယ်။
Bangkok Post Breaking News _9Sept 2008
သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပဲ ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ တရားရုံးက ၀န်ကြီးချုပ် ဆမတ်ဟာ Commercial Television တစ်ခုမှာ ၂ကြိမ်တိုင်တိုင် အချက်အပြုတ်နည်းပညာတွေ လက်စွမ်းပြခဲ့တာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ တရားသူကြီး ကိုးဦးပါဝင်တဲ့ ဂျူရီအဖွဲ့က မစ္စတာဆမတ် နုတ်ထွက်ပေးရမယ်လို့ တညီတညွတ်တည်း ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ပါတယ်။
“တရားခံဟာ အခြေခံဥပဒေ အပိုဒ်ခွဲ ၂၆၇ ကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးဟာလည်း အဆုံးသတ်သွားပါပြီ” လို့ ဂျူရီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Chat Chonlaworn ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆမတ်ဟာ Face Media က ကမကထလုပ်တဲ့ Chim Pai Bon Pai (Tasting and Grumblimg) နဲ့ Yok Khayong Hok Mong Chao (All Set at 6am) cooking programmes တွေမှာ အခကြေးငွေယူပြီး ပါဝင်လက်စွမ်းပြခဲ့ခြင်းအားဖြင့် အခြေခံဥပဒေ ပိုဒ်ခွဲ ၂၆၇ ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးတွေကတော့ ယာယီအစိုးရအဖြစ် နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း ၃၀ အကြာမှာ ပါလီမန်က ၀န်ကြီးချုပ်အသစ်ကို ရွေးကောက်တင်မြောက်ပြီးချိန်အထိ ဆက်လက်တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်း အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် Somchai Wongsawat က ယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေအရ ၀န်ကြီးချုပ်ဟာ အမြတ်ငွေ သို့မဟုတ် ၀င်ငွေရရှိဖို့ မည့်သည့်ပုံစံမျိုးနဲ့မှ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှ စီးပွားရေးအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလုပ်ဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။
အစိုးရအိမ်တော်ကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ အတိုက်အခံ People's Alliance for Democracy (PAD) ထောက်ခံသူတွေဟာ ဂျူရီအဖွဲ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြားရတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်ပြီး အော်ဟစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအာဏာရ People Power party (PPP) ရဲ့ ဒုတိယခေါင်းဆောင် Karn Thiankaew ကတော့ တရားစီရင်ထုံးကို လေးစားပါတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက် (အင်္ဂါနေ့) စောစောပိုင်းကတော့ PPP ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Kudep Saikrachang က ပါတီဝင်တွေဟာ မစ္စတာဆမတ်ကို အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ထောက်ခံဆန္ဒမဲပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
PPP ပါတီရဲ့ ပါလီမန်အမတ်တစ်ဦးလည်းဖြစ် ပါတီစည်းရုံးဆော်သြသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Witthaya Buranasiri ကတော့ မစ္စတာဆမတ်ပြန်လည် ရွေးကောက်ခံရဖို့ မဟာမိတ်ပါတီတွေကို ဆော်သြမယ်လို့ပြောကြားပါတယ်။
“တချို့တွေက Chart Thai ပါတီခေါင်းဆောင် Banharn Silpa-archa ကို ၀န်ကြီးချုပ်နေရာအတွက် အဆိုပြုကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကို မစ္စတာဆမတ် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးမှာ ဆက်လက်တည်မြဲဖို့ ထောက်ခံကြဖို့ အဆိုပြုကြမှာပါ” လို့သူက ပြောသွားပါတယ်။
Chart Thai ပါတီခေါင်းဆောင် Banharn Silpa-archa ကတော့ သူဟာ ဒီရာထူးကို လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြင်းထန်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖိအားဒဏ်တွေကို မခံနိုင်လို့ပါလို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“ဒီအတိုင်းပဲနေတာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် အသက်ရှည်ရှည်နေချင်တယ်” လို့ သူကပြောသွားပါတယ်။
သိန်းစိန်ကို လက်စွမ်းပြ ချက်ပြုတ်ကျွေးရုံနဲ့အားမရ ပိုက်ဆံယူပြီး တီဗွီမှာ လက်စွမ်းပြမိတဲ့ ဆမတ်တစ်ယောက်တော့ ဒုက္ခနဲ့ လှလှနဲ့ကို တွေ့သွားတာပါပဲ။ ဒါဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ရေးစံနစ်ခိုင်မာပုံကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလို တရားစီရင်ရေးစံနစ်ဟာ နအဖရဲ့ နောက်မြီးဆွဲအဆင့်မဟုတ်တာကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတာပါပဲ။ ဒီသတင်းကို မြန်မာပြည်သူတွေ ဖတ်ခွင့်သိခွင့်မရအောင် နအဖဟာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပိတ်ပင်ဦးမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘိုသန်းရွှေနဲ့ အာဏာရူး စစ်ဘိုတစ်သိုက်ကို ပြောချင်တာကတော့ “မိုးကြိုးပစ်တာ တန်းလက်နဲ့ကာလို့မရဘူး” ဆိုတာပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနဲ့ နိုင်ငံတကာကလည်း စိတ်ပူနေကြပါတယ်။ အခုဆို သီတင်းသုံးပတ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ဘာသတင်းမှ တိတိကျကျမသိရတဲ့အတွက် အန်တီစုရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို မသိရပါဘူး။ နအဖ သတင်းစာမီဒီယာတွေကတော့ လူထုကိုအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်အောင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပဲ တင်းမာနေသယောင်၊ သူတို့တစ်တွေကတော့ သဘောထားကြီးသယောင် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးသားနေတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူထုဟာ ၈၈ မတိုင်ခင်က လူထုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကိုလည်း နအဖ အနေနဲ့ ကောင်းစွာမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား မြန်မာဘလော့ဂါတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ စင်္ကာပူမှာ သင်တန်းတွေပေးထား၊ စင်္ကာပူ အကူအညီနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ cyber warfare center လည်း မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ နအဖ လိမ်တိုင်းညာတိုင်း ယုံကြည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
နအဖ ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်ပြန်ထောင်း၊ ကိုယ့်မိုက်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်နေတဲ့ ပွဲပါပဲ။ ကျော်ဆန်းရဲ့ လူမိုက်စကားတွေ၊ သတင်းထောက်ကို လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး ငါးစိမ်းသည်ရန်တွေ့တွေ့ပုံတွေကိုပဲ တွဲမြင်မိမှာပါ။ လူထုကနောကြေနေပါပြီ။ ရှင်ဥက္ကဌကို မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလို “မဟုတ်တာတွေပဲ ရွေးပြောတက်တယ်” ဆိုတာလိုပါပဲ။ နအဖ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့မှာသာ နာစရာတွေမရှိခဲ့ရင် မပြုံးပဲဝါးလုံးကွဲ ရယ်ရမယ့် မျောက်ပွဲပါပဲ။ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ၊ ပါးစပ်ထဲတွေ့ကရာ ပုဒ်မတွေနဲ့ တောင်စဉ်ရေမရ မျက်စိမှိတ်ပြီး ရမ်းအော်နေတဲ့ပွဲပါ။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခါလုပ်တိုင်း နအဖဟာ သူ့ရဲ့ညံ့ဖျင်းလှတဲ့ကိုင်တွယ်ပုံတွေကို လူကြားသူကြားချပြပြီး မရှိတဲ့သိက္ခာတွေ ကျပြီးရင်းကျနေတာကို လည်းသိဟန်မတူပါဘူး။ အဲဒီလို သိနိုင်လောက်တဲ့ အသိဥာဏ်အဆင့်အတန်းလည်း ရှိပုံမပေါ်ပါဘူး။ အခုလည်း လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများ ကွန်ရက် (HRDP) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်အေးနှင့် အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦးတို့ကို ရွှေပြည်သာကြံ့ဖွံ့ရုံးဗုံးဖောက်ခွဲမှု ကျူးလွန်သူအဖြစ် ရမ်းသမ်းစွပ်စွဲထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကာယကံရှင်တွေကတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုပါတယ်။
အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေက ကောက်နုတ်ထားချက်တွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
ယမန်နေ့က နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ရီက ဇူလိုင် (၁) ရက် ရွှေပြည်သာကြံ့ဖွံ့ရုံးကို ဗုံးဖောက်ခွဲမှုကျူးလွန်ခဲ့သူများသည် ထန်းတပင် အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ် ရန်ရွှေနှင့် ရွှေပြည်သာအန်အယ်လ်ဒီ ဇော်ဇော်အောင်တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗုံးဖောက်ခွဲရန် ပြည်ပက အဓိကစီမံဆောင်ရွက်ပေးသူမှာ FDB မှ ကျော်ထက်ဖြစ်ပြီး ဗုံးပေးသူနှင့် ငွေကြေး တဆင့်ခံ ထောက်ပံ့ပေးသူမှာ ဦးမြင့်အေးဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
ရဲချုပ်၏ ဦးမြင့်အေးအပေါ် စွပ်စွဲချက်များသည် လုံးဝဆီလျော်မှုမရှိဘဲ မှားယွင်းသည့်စွပ်စွဲချက် များသာဖြစ်သည်ဟု HRDP အဖွဲ့မှ ဦးမောင်မောင်လေးက ပြောကြားသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့က လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စပဲလုပ်တယ်။ မည်သည့်တခြားကိစ္စမှ လက်ခံဆောင် ရွက်ခြင်းမရှိဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စတွေ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဆန့်ကျင်တယ်။ ဘယ်လို အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုမဆို ဆောင်ရွက်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရ အကုန်ဆန့်ကျင်တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျနော်တို့က တစုံတရာ အားပေးစရာ၊ ပတ်သက်စရာအကြောင်း ဘာမှမရှိဘူး” ဟု ပြောသည်။ (NEJ - 8 Sept 2008)
NLD ကရော ဒီစွပ်စွဲချက်အပေါ် ဘယ်လိုများတုန့်ပြန်ပါသလဲ။
ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုများကို ကျူးလွန်ရာတွင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် ဆိုသည့် ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီ၏ စွပ်စွဲချက်အပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက “မနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အန်အယ်လ်ဒီဆိုပြီး ပြောသွားတဲ့ တော်တော်များများဟာ အန်အယ်လ်ဒီက ထုတ်ပယ်ပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားချက်တွေဟာ စွပ်စွဲချက်အဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ သက်သေထင် ရှားတဲ့ အချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ အန်အယ်လ်ဒီအပေါ်မှာ ပိုပြီးဖိအားပေးတဲ့သဘောလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဒီဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးသမားတွေနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီက ချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါ ” ဟုပြောသည်။ (NEJ - 8 Sept 2008)
“ဒီဗုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင် တဦးတယောက်ကိုမှ ဖမ်းတာဆီးတာ ကျနော်တော့ မကြား သေးဘူး၊ အခု ပြောတဲ့ လူတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၄-၅ နှစ်ကတည်းက အန်အယ်လ်ဒီ က ထုတ်ထားတဲ့ လူတွေ၊ အဓိက က အန်အယ်လ်ဒီ သိက္ခာကျအောင် ကြိုးစားတာပဲ”ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသည်။ (The Irrawaddy _ 8 Sept 2008)
FDB ကရော ဘယ်လိုများ တုံ့ပြန်ပါသလဲ။
“ဖက်ဆစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာဏာရှင်ဆိုတာ လူထုကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေ၊ အာဏာရှင်တွေကို လူထုရှေ့ကနေ ဆန့်ကျင်ခေါင်းဆောင်သွားနိုင်တဲ့သူတွေကို အဲလိုပဲ ပုံဖျက် တတ်ကြတယ်၊ လူ့အခွင့်အရေးသမားတယောက်ကို အခုလို ဗုံးခွဲတဲ့အကြမ်းဖက်သမား တယောက်အနေနဲ့ ပုံဖျက်တာကတော့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်နေကျပဲလို့ မြင်တယ်”
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု(FDB) ဒုတိယအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ထက်ရဲ့ တုံ့ပြန်ပြောကြားချက်ပါ။
“ကြံ့ဖွံ့ရုံးဗုံးပေါက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ စက်တင်ဘာမှာ ဘာလက်နက်မှ မပါတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ဘာသာ၊ သာသနာမှန်းမသိ၊ မတရား ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတယ်၊ ဘေးက ကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုတောင် အဓမ္မရိုက်နှက်ဖမ်းတာ၊ အဲလိုဖိနှိပ်မှုတွေ ပြင်းထန်လို့ရှိရင် တန်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာတာဟာ ဓမ္မတာပဲ၊ ဖိနှိပ်မှုတွေကို တန်ပြန်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေက ကျနော်တို့ မလုပ်ပေမဲ့ ဒီကိစ္စတွေအပေါ်မှာတော့ ကျနော်တို့က ထောက်ခံရလိမ့်မယ်၊ ကျနော်ကတော့ အဲလိုပဲမြင်တယ်” ဟု ဦးကျော်ထက်က ဆက်ပြောသည်။ (Yoma3 News Service _ 8 Sept 2008)
ဒီတုံ့ပြန်ချက်တွေကို ကြည့်ရင် NLD ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုဟာ သိပ်ကိုလက်လွတ်စပယ် ပြီးစလွယ်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရ တကယ်တမ်းဖြစ်သင့်တာက NLD ကို ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံရေးအရ သိက္ခာကျအောင် ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အတင်းဆက်စပ်ပေးနေတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သင့်ပါတယ်။ နအဖကို ဒီလို အောက်တန်းကျတဲ့ အပြုအမူတွေ နောက်ထပ်မလုပ်ဖို့ လူသိရှင်ကြား နိုင်ငံတကာကိုပါ ကြေငြာချက်တွေထုတ်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိအားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလို ပြီးစလွယ် ပျော့တိပျော့ညံ့ငြင်းဆိုတာလောက်နဲ့တော့ NLD ရဲ့ရှေ့ရေးဟာ ရင်လေးစရာဖြစ်နေပါပြီ။ လက်ရှိ NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်နေပါပြီ။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတဦးချင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ အန်အယ်လ်ဒီအပေါ် နောင်မည်သို့ သဘောထားရမည်ဆိုသည်မှာ အန်အယ်လ်ဒီ၏ ရှေ့ဆက် ဆောင် ရွက်မှု အပေါ် မူတည်သည်ဟု ပြန်ကြား ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းကလည်း ယမန်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားသည်။ (NEJ _ 8 Sept 2008)
ကျော်ဆန်းရဲ့ စကားအသွားအလာအရဆိုရင် မကြာခင်ကာလမှာ NLD ဟာ နအဖရဲ့ အလဲထိုးခြင်းကို ခံရတော့မယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် တစ်ခုတည်းသောမျော်လင့်ချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါပဲ။ အန်တီစုဟာ အခုဆိုရင် သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်တောင် ဂရုမစိုက်တော့ပဲ နအဖကို သူတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ အပြင်းအထန် ဖိအားပေးနေပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ NLD အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံးက ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ နအဖကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်အောင် နိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းဖိအားပေးကြရမှာပါ။ NLD ရဲ့ကြေငြာချက်လို “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် နင်တို့ကြောင့်နော်..” ဆိုတဲ့ ကြေငြာချက်လောက်နဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
NLD ရဲ့ ကြေငြာချက်ကို အောက်မှာဖတ်ကြည့်ပါဦး။ မေအိခင် blog မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။
Bangkok Post4Sept 2008
ဒီကနေ့ Bangkok Post သတင်းစာ Breaking News မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးနှစ်ဦးဟာ ၀န်ကြီးချုပ်စမတ်ရဲ့ အိမ်တော်ကို ဆန္ဒပြဖို့အသွား လမ်းမှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့ည (ကြာသာပတေးနေ့) ၉း၃၀ ခန့်မှာ Ramkhamhaeng တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသူကျောင်းသား အယောက် ၁၀၀ လောက်ဟာ စမတ်ရဲ့ အိမ်ဘက်ကို ဆန္ဒပြဖို့ စုဝေးတဲ့နေရာကနေ ထွက်လာပြီး မကြာခင်မှာပဲ မော်တော်ဆိုင်ကယ် တစ်စီးအနားက ဖြတ်မောင်းသွားပြီး ကျောင်းသားထုထဲကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်သွားတာလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အပစ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသူနှစ်ဦးစလုံးဟာ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီး သူတို့ကို Sinpat ဆေးရုံကို အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းကဆိုပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။
ဘန်ကောက်က ဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေ နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ အတော်လေး လှုပ်လှုပ်ခပ်ခပ်ဖြစ်နေပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ ဖော်ပြခွင့်မရဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေကို မီဒီယာတော်တော်များများမှာ တွေ့နေရတော့ ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်မှာ အထူးအတွေ မဖော်ပြပဲ ထားလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ထိုင်းအစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံဟာ နအဖရဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေနဲ့ တူလာတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ ဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်တပ်ကရော၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ကပါ အတင်းအဓမ္မ အကြမ်းဖက်မှုတွေ မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ရဲတပ်ဖွဲ့က မျက်ရည်ယိုဗုံးခွဲပြီး လူစုခွဲဖို့ကိုတောင် အတော်ကလေး စဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်ခဲ့ကြပုံပေါ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ကတော့ အာဏာသိမ်းတာဟာ မှန်ကန်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သာ ဖြေရှင်းရမယ်လို့ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ စစ်တပ်ကို အကြမ်းဖက်ခိုင်းလို့မရတဲ့အခါကြတော့ ၀န်ကြီးချုပ်စမတ်ဟာ လူထုအချင်းချင်း ပြန်ပြီးတိုက်ပေးတဲ့နည်းကို အသုံးပြုလာတာဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ နအဖက ကြံ့ဖွံ့တွေ စွမ်းအားရှင်တွေအသုံးပြုပြီး ပြည်သူကို ပြန်နှိပ်စက်နည်းမျိုးပါပဲ။ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာ စမတ်ကို ထောက်ခံတဲ့ အနီရောင်ဝတ်ထားသူတွေနဲ့ အ၀ါရောင်ဝတ် ဆန္ဒပြသူတွေ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ကြပြီး ဆန္ဒပြသူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ခေါင်းကို အရိုက်ခံရလို့ သေဆုံးတယ်ပြောပေမယ့် ဆေးရုံက ကြေငြာချက်ထုတ်တဲ့အခါမှာ ရင်ဘတ်မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပစ်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သေနတ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီနေ့က သတင်းထဲမှာတော့ အနီရောင်ဝတ်တွေဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှေ့ကနေ ဆန္ဒပြသူတွေကို တုတ်တွေ ခဲတွေနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ တန်ပြန်ဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာ အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးတစ်ဦးပါဝင်နေတယ်လို့လည်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီကနေ့လည်း ဒီလို သေနတ်နဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ပစ်ခတ်ခဲ့တာဟာ စမတ်ရဲ့ အစီအမံမဟုတ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ စမတ်ဟာ နအဖ ရဲ့ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေကို ယူသုံးနေတာများလားလို့ တောင်တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းမရှိတဲ့၊ မြန်မာပြည်တွင်းရေးကို သေသေချာချာနားမလည်ပဲ ၀င်အာချောင်တဲ့ စမတ် ပြုတ်ကျပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့ ငြင်းဆို
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ကို ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ CNN သတင်းဌာနမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမရဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ရော အစိုးရ ထိပ်တန်းဝန်ကြီးတစ်ဦးကိုပါ လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံတွေအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ နှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေတာကို ပိုပြီးစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်လာတာကို ပြသတာပဲဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
UN ရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ခန့်ထားခဲ့ရတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ကို ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉ နှစ်အတွင်းမှာ ၁၃ နှစ်ကျော် နေအိမ်အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ခံယူဖို့ကိုလည်း ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူမရဲ့ ပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကတော့ ဒါဟာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ဖြစ်ပေါ်လာရေး နှောင့်နှေးနေမှုအပေါ် သူမရဲ့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်မှု ပိုတိုးလာတဲ့ အခြေအနေကို ထင်ဟပ်တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်အခုပဲ BBC နဲ့ NLD က ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ရဲ့ မေးမြန်းခန်းကို နားထောင်လိုက်ရတော့ စစ်အစိုးရသတင်းစာတွေဟာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ထိန်ချန်ပြီး အထင်အမြင်မှားအောင် ရေးသားဖော်ပြထားတယ်လို့ ပြောဆိုတာ ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဦးအောင်ကြည်ကို မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ တွေ့ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်၊ နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်၊ သို့သော်လည်း အခုအချိန်မှာ သူမရဲ့ အခွင့်အရေးတွေအတွက် ရှေ့နေနဲ့ တိုင်ပင်နေရတဲ့အတွက် ဦးအောင်ကြည်ကိုရော ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကိုပါ အခုလောလောဆယ်ဆယ်တော့ မတွေ့နိုင်သေးကြောင်း ပြောပေးပါလို့ သူမရဲ့ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းကတဆင့် မှာကြားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
အမေရိကန် စာရေးဆရာ Jack London (1876-1916) ရဲ့ Bestseller တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒီဝတ္ထုကို 1904 ခုနှစ်မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး စာအုပ်တွေထဲက တစ်အုပ်ပါ။ ဆရာမိုးဝေနဲ့ ဆရာညွန့်ကြူးတို့ မြန်မာဘာသာကို ပြန်ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဆရာမိုးဝေရဲ့ ဘာသာပြန်ကို မဖတ်ဘူးပေမယ့် ဆရာညွန့်ကြူးရဲ့ ဘာသာပြန်ကိုဖတ်ပြီး သိပ်သဘောကျလို့ မူရင်းစာအုပ်ကို ရှာဖွေဖတ်ရှုခဲ့တာပါ။
ဆရာညွန့်ကြူးရဲ့ ဘာသာပြန်ကိုနှစ်သက်သလို မူရင်း Jack London ရဲ့ အရေးအသားကို ဖတ်ရတော့ ပိုပြီး ဒီဝတ္ထုကို နှစ်ခြိုက်ခဲ့ရတာပါ။ မူရင်းမှာတော့ ဆရာညွန့်ကြူးရဲ့ ဘာသာပြန်ထက်ကို ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ခြင်းစီကို ပိုပြီး အသေးစိတ် ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။ စကားပြောပုံ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပုံ၊ စကားပြောနေရင်း ခြေထောက်ကလေး ဟိုဘက်ဒီဘက် ပြောင်းရပ်တာကအစ အတော်ကို အသေးစိတ် ရေးဖွဲ့ထားတာပါ။
“ပင်လယ်ဝံပုလွေ” ဟာ London ရဲ့ ခါးသီးတဲ့ ဂျပန်ပင်လယ်ပြင် သင်္ဘောသားဘ၀ကိုလည်း ထင်ဟပ်ထားတယ်လို့ ဝေဖန်ရေးသမားတွေက ပြောကြပါတယ်။ တကယ်တော့ London ဟာ ဘ၀မျိုးစုံမှာ ကျင်လည်ခဲ့သူပါ။ သင်္ဘောသား၊ ဂုံလျှော်စက်ရုံအလုပ်သမား၊ အမေရိကန် Gold Rush မှာ ရွှေတူးသမား၊ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် အလုပ်လက်မဲ့ဘ၀၊ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဝင် နိုင်ငံရေးသမား၊ (နိုင်ငံရေးမှုနဲ့လည်း ထောင်ကျဖူး)၊ စာရေးဆရာ၊ စသည်ဖြင့် ဘ၀မျိုးစုံအောင် ကျင်လည်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဘ၀မျိုးစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့၊ ဆက်ဆံခဲ့ရလို့လည်း လူတွေရဲ့ စရိုက်ကို ကောင်းစွာ သရုပ်ဖော်နိုင်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ အများအားဖြင့်တော့ သူ့ဝတ္ထုတွေဟာ လူဟာ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ရ၊ အနိုင်ယူ ကျော်လွားရတာကို သရုပ်ဖော်ထားတာများပါတယ်။
“ပင်လယ်ဝံပုလွေ” ဟာ အနုနဲ့ အကြမ်း၊ လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ တောရိုင်းဥပဒေ၊ ခွန်အားနဲ့ ဥာဏ်ပညာ အားပြိုင်ပွဲလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်ဟာ “၀ံပုလွေ လာဆင်” ဖြစ်ပါတယ်။ လာဆင်ဟာ ခွန်အားကြီးတယ်၊ ကြမ်းတမ်းတယ်၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ဘ၀မှာ လူ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာနဲ့ မကြုံခဲ့ရပဲ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကို ကြားတောင်မကြားဘူးတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ (Hamp က ethic ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပြောတော့ လာဆင်က “ဒါဟာ ငါ့ရဲ့ဘ၀မှာ လူတစ်ယောက်ဆီက(လူတစ်ယောက် ပါးစပ်က) ethic ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပထမဆုံး ကြားဖူးတာပဲ” လို့ ပြောရှာပါတယ်။) ဒါပေမယ့် ဥာဏ်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အလျောက် ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဘာသာ စာတက်အောင်လေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီး နစ်ရှေးတို့၊ ရှိုပင်ဟောင်ဝါတို့လို အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေရဲ့ စာတွေကို ဖတ်နိုင်တဲ့အထိ တိုးတက်လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အတွေးအခေါ်တွေကို သူလိုရာထုတ်နုတ်ကောက်ချက်ဆွဲယူပြီး ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ် တံခါးပိတ်ပြီး အမှန်လုပ်နေသူပါ။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေဟာလည်း ပညာမတက်၊ အတွေးအခေါ်မရှိ လက်ရုံးအားကိုး ဖျံဖမ်းသမား အရိုင်းအစိုင်းတွေသာဖြစ်တာမို့ သူနဲ့ အတွေးအခေါ်ခြင်း ယှဉ်ပြိုင်ပြောနိုင်တဲ့သူ၊ သူ့အယူအဆတွေကို လှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့သူ မရှိခဲ့ပါဘူး။
သူပိုင်တဲ့ ဖျံဖမ်းသင်္ဘော “တစ္ဆေ” ပေါ်မှာ သူသာခွန်အားအကြီးဆုံး၊ သူသာ ဘုရင်၊ သူသာ ဥာဏ်ပညာအရှိဆုံး လူတစ်ယောက်ပါ။ “တစ္ဆေ” ပေါ်မှာတော့ အရာရာကို ခွန်အားကသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေထဲကို ပျော့တိပျော့ဖတ်၊ စာရေးတာကလွဲလို့ ဘာကိုမှ လက်ကြောတင်းအောင် မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ စာရေးဆရာ ဟမ်ဖရီ ဗန် ဝေဒင် (သူ့ကို လာဆင်က ဟမ့် လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။) နောက်တော့ ... ကဗျာဆရာမ မော့ဒ်ဘရူးစတား တို့ ရောက်လာတဲ့အခါမှာ မတူညီတဲ့ character တွေအကြား အယူအဆရေးရာ ထိပ်တိုက်တွေ့မှု clash တွေ၊ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတော့တာပါပဲ။ ပျော့တိပျော့ဖတ် စာရေးဆရာ သိုးကလေးနှစ်ကောင်ဟာ ၀ံပုလွေကြီး လာဆင်ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖတ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ ကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တွေးစရာတွေလည်း အများကြီး ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။